ဖဲပြရန် - ဖဲချပ်အွန်လိုင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ကြည့်ကြရကားအဘယ်သို့မဟာဗျူဟာဂိမ်း၏'ဘီဖဲချပ်ပေါ်မှာတိကျတဲ့ဥပမာ။ စေရဲ့အစမှာကြည့်စားပွဲနှင့်မည်သို့တိုးတက်စေရန်တိုက်ပွဲများဂိမ်း။ ဘီဖဲချပ်သည်တစ်ဘုံနာမတော်အားလုံးအတွက်ဖဲချပ်စတိုင်များ၊ကစားသမားသက်ဆိုင်သောအခြေခံအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးသက်သေအခြေခံမူများအတွက်ဂိမ်းအစဉ်မှီခိုသာ၏အပြုအမူအပြိုင်ဘက်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်။ ပြိုင်ဘက်ကိုအသာဤအခြေအနေကိုနှုန်းအဖြစ်အသုံးအများဆုံးအမျိုးအဖဲကစားသမား-ပုံမှန်ဖြေစက်၊ငါး၊အရူး၊ငါးမန်း၊စသည်တို့ကို။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမဟာဗျူဟာအပေါ်အခြေခံသည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသမ်၏လုပ်ရပ်သူများအတွက်သာထိုအသီးအသီး။ အချက်အဘီဖဲချပ်သည်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးစားသမားခွင့်ပြု၊သူတို့ကိုရရှိရန်ပိုက်ဆံအများကြီးကြာကာလအတွင်းအချိန်။ ဒါကတော်တော်များများက အေးအေးဆေးဆေးနှင့်တိုင်းတာဂိမ်းကာလအတွင်း၊သင်မည်မဟုတ်မသာအန္တရာယ်သင့်ရဲ့အသီးနှံများကိုပုံ၊ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ရန်အကောင်းကိုနားလည်ဖေါ်ယာယ်နှင့်ဖဲချပ်။ အားလုံးပေါ်ပေါက်၊လာင္း၊ သာဤမဟာဗျူဟာတွက်ချက်ထားကြသည်၊အားလုံး၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအနိုင်ရ၏။ အများစုကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ဘီဖဲချပ်မစိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ပျင်းစရာဂိမ်းမဟာဗျူဟာ။ လက်မှလက်အမည်ရှိစေရန်တူညီဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးပြိုင်ဘက်ရဲ့ကစားစတိုင်အပေါ်၎င်းတို့။ အကွာအဝေးမှာအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်၊ဒီရလဒ်တွေကိုပေး၊ဒါပေမဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်သည်ဤကစားမဟာဗျူဟာများဆန့်ကျင်အတူတူပြိုင်ဘက်? ဒီအခြေအနေ၊သူတို့လျင်မြန်စွာနားလည်သဘောပေါက်သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့အလွယ်တကူလျောညီထွေဖြစ်အောင်။ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်သောအခါ ၃-အလောင်းအစား၊သင်အစွမ်းထက်တဲ့စတင်သောကဒ်များသင်သည်သင်၏လက်၌၊ချေါသောအခါ၊သင်ရုံပျမ်းမျှအတွဲသို့မဟုတ်ကွက်လပ်တွင်ပါရှိသောကတ်များ။ ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်းကသူတို့ကမကြာမီရိုက်နှက်နိုင်ပါ၊ပင်လျှင်သင်အတိုင်းလိုက်နာအားလုံးအဖဲ ။ ဘီ-ဖဲချပ် ဒါဟာကစားသမားလိုအပ်ဟုလေ့လာမှုကိုပုံမှန်နှုန်းကိုသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်လည်းမရှိသည့်အခါလုံလောက်သောသတင်းအချက်အပေါ်ပြိုင်ဘက်။ ဇယားအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ တိကျသောနှုန်း၏လက်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်-ကိုမြှင့်တင်၊၃-ရိုက်နှက်၊ပြီးခေါ်ရန်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မယ်အပေါ်မူတည်ပြီးကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစား။ ဥပမာအားဖြင့်၊၆-မက်စ်ဇယားပွင့်လင်းအားလုံးအားလုံးအတူ မှာအပြည့်အဝလက်စွပ်သာ ၆၆ အ။ ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးကြောင်းဇယားအသုံးပြုကြသည်သာေ နေကြပါတယ်။ သင်ကလုပ်မပေးနိုငျသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အဘို့ထိုသူတို့ ။ ခွင့်အလမ်းများ၊လိုင်းဆွဲ၊လက်ခွန်မျိုးအစားပေါ်မူတည်၏ပြိုင်ဘက်နှင့်ခြုံငုံအခြေအနေ။ ထို့ကြောင့်၊၏အသုံးပြုမှုကိုဇယားပြီးနောက်နပ္ရိုးရှင်းတဲ့မီးလောင်၏။ ဒါဟာလုံလောက်ပါတယ်ဖြုန်းဖို့မိနစ်အနည်းငယ်နှင့်ရေးသားဖို့ကြိုးစားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းမှအသီးအသီးအနေအထား:တူချင်ပါတယ်အဘယျသို့ ၄-လောင်း၊၃-လောင်းကစား၊ဖုန္းဟဿဖြစ်၊ပွင့်လင်း-မြှင်။ထိုနောက်မှ၊သင်အမြဲများမူလလက်နှုန်းသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ၊အခါသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအခြားမည်သည့်အချက်အလက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကစား။အတွက်အဘီဖဲကအကြံပြုသည်အမြဲအလောင်းအ ၁ ၂ အိုးသို့မဟုတ်ပို ။ ဘာျကစားသမားနှင့်အတူကစားပုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်? ရွေးချယ်တဲ့အခါ ပုံးအလုပ္အကိုင္၊သင်တို့သည်အောက်ပါစဉ်းစားသင့်ပါသည်:ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အ နှင့်အတူအိတ်ကပ်တစ်စုံအပေါ်၊ဒါပေမယ့်သင်ထိပ်သို့အထားအပေါ်အခြောက်အနပ္။ သင်ရင်ဆိုင်နေရတစ်ခုပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဘက်အဘယ်သူသည်ဟုခေါ်သင့်ရဲ့မြှင့်တင်ရန်အတွက်အသေးစားမျက်စိကန်း။ သင်သတိပြုမိကြပေမည်ကြောင်းစောင့်ရှောက်ပြုစုပျိုးထောင်အခြားပြိုင်ပွဲ'နည်း။ အောင်လတ်လောင်း၏ခန့်မှန်းခြေ ၃၅-၄၀ အစားအဆင့်အတန်း ၅၀ ပမာဏ။ ရန်သူကိုအလုပ်ရရန်ခွင့်ပြုပြပွဲကျူးကျော်နှင့်စုဆောင်းသုံးခုလမ်း၏။ အခြေခံပညာမဟာဗျူဟာေျပာခဲ့တဲ့အ ပြီးနောက်နပ္၊ထိုအခါနီးပါး ၁၀၀ ထိုအချိန်ကာလ၏လိုအပ်နေရာအလောင်းအစား။ ပြားဖဲချပ်စားသမားသို့လှည့်စက်ရုပ်ဒီဖတ်ပြီးနောက်စာပိုဒ်၊သူတို့နေရာကစားပွဲအတွက်မသင့်လျော်သောအခြေအနေများအတွက်ဒီရည်ရွယ်ချက်။ သင်ခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတိုးနှင့်အတူငန်းမှတစ်နှောင်းပိုင်းအနေအထား၊လမ်းအပေါင်းတို့အဖို့အကြီးမားမျက်စိကန်း။ ကစားသမားဘီဘီလိုက်အခေါ်၊ထိုအခါေျခညွပ္ဖိနပ္အသုံးျ ၉၈၇ အသက်တန့်။ ငါသတ်မှတ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အလောင်းအစား? လုံးဝဤအမှုကိုစရာအဖြစ်၊အများကြီးပိုပြီးအသေးစားနှင့်အလတ်စားကတ်များအတွက်ကြီးမားကာအကွာအဝေး၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ကျိန်းသေမစွန့်ပစ်ထွက်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအနပ္။ ဒါဟာပိုပြီးအမြတ်အစွန်းကစားသမားစစ်ဆေးနပ္၊နှင့်ပြိုင်ဘက်စစ်ဆေး၊သင်အလောင်းအစားတွင်းတစ်တွင်းထူထောင်အတည္ျအလောင်းအစား။ အခါကြီးမားတဲ့အကာအပေါ်ထားရှိကိုယ်တိုင်ကလှည့်၊သင်အလွယ်တကူပစ်ပယ်ဆုံးရှုံးသွားမပါဘဲကြီး။ အခြေခံဘီဟာဗျူဟာအပေါ်မိုက်ခရို-ကန့်သတ်နေဆဲအကျိုးရှိ၏။ အရင်ကဆိုရင်များလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်စနစ်၊ဒါပေမဲ့ငွေရှာဖို့၊သင်ဖြည့်စွက်အတူအများအပြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို။ အဘီစီစနစ်အတွက်ဖဲချပ်ပါဝင်သည်၏တစ်စု၏လက်တစ်ခုနှင့်သမ်၏သက်သေလှုံ့ဆျောလိမ့်မည်၊အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်မှာကနဦးကန့်သတ်။ ဒါဟာအတွက်အသုံးပြုသည် ပြိုင်ပွဲနှင့်ငွေသားတွေအဓိကရည်မှန်းချက်သို့နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာ၏။ ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ၊အဖဲကစားသမားအမည်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်:၉ အလက်များပါဝင်သောစာရင်းများကတ်များနှင့်အတူ၊အရာအတွက်အများဆုံးအခြေအနေဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ အတွက်ဇယား ဘီဖဲချပ်ပေါ်ကပြသပြီးပြည့်စုံစာရင်းအလက်ကိုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလုပ်ရပ်တွေကိုအသီးအသီးအနေအထား။ အများစုကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲကစားသမားတွေကစားငွေသားနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအထပ်၊ဒါကြောင့်သူတို့သုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်ပြုလုပ်ဖဲ၊အစဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မြင့်မားတဲ့ကစားပွဲအတွက်နှင့်ကြီးမားသော။ ဒါပေမယ့်ငွေသားချစ်သူများသည်အစဉ်အမြဲဝယ်နိုင်အထိအလယ်အလတ်အဆင့်စားပွဲ၏။ ဒီအခြေအနေ၊ကစားသမားလိုအပ်ချက်များကိုဖွင့်ရန်အဘီဖဲ၊အရာသင်ရခွင့်ပြုထားသောအတည်ငြိမ်တဲ့အကျိုးအမြတ်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်သေးငယ်တဲ့အဆင့်မားတဲ့အနိုင်ရဖို့။ အဘီစီမဟာဗျူဟာ၊အဓိကအအလေးပေးအဖြစ်အပေါ်ရွေးချယ်ပုံ၏အားကြီးသောလက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့အပေါ်တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်သဘောထားကိုများပြိုင်ဘက်အလက်များ၏အလတ်စားအစွမ်းသတ္တိ။ အသုံးပြုဤအရည်အသွေးတွေကိုအခြေခံမဟာဗျူဟာများ၊သင်ငွေရှာအပေါ်အတိုက်အခံရန်အသင့်ဖြစ်ကြမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်အတူအိုးမေးခွန်းထုတ်စရာလက်တုန့်ပြန်အတွက်အသင့်ရဲ့ကျူးကျော်။ မတူညီတဲ့ဘုတ်ဖြင့်မျက်နှာပြင်၊လုံလောက်သောအကဲဖြတ်၏အခွန်အလက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတစ်ဖန်မဖြစ်ဖို့အရှုံးမပေးဖို့အပါက္လွသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်၏၊ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများ။ ဂိမ်းစဉ်အတွင်းများအတွက် ဒါပေမဲ့သာတူတိုကစားသမားတွေ၊အသုံးအဘီစီမဟာဗျူဟာ၊သင်သိသိသာသာတိုးမြှင့် ။ အများစုကသင်တန်းသားများကိုယူအန္တရာယ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏနှင့်အတူပိုပြီးအလွယ်တကူ၊အရာမကြာခဏဦးဆောင်ပးသည္။ မရှိကန့်သတ်ဂိမ်း နောက်တဖန်အတစ်ရှားပါး။ မကြာခဏ၊ဖဲကစားသမားခေါက်အလှည့်သို့မဟုတ်နပ္၊နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ကစားသမားနေရာလာင္းအကြာအိုး။ လည်းမရှိသည့်အခါဂိမ်းအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အနည်းငယ်ပိုက်ဆံ၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်ဝင်ငွေဖို့အထိ ။ ဒီအခြေအနေကိုမဟာဗျူဟာရရှိကြမယ့်နေရာလေးကိုအတွက်လာ။ ပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျှင်အဆိုပါဂိမ်း၊တစ်ဦးအားကြီးသောအကွာအဝေး၏လက် ၊ နှင့်အတူလက်ထိပ်တစ်စုံသို့မဟုတ်မြင့်မားပို့စ်-နပ္၊ထိုအခါကစားသမားနိုင်ပါလိမ့်မည်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်နှောင်းပိုင်းကုန်သွယ်လမ်း။ သူတက်ခူးလိမ့်မည်ဘဏ်အများကြီးပိုမကြာခဏပေါ် ။ အဆိုပါမရှိခြင်း အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအသုံးပြုဘီဟာဗျူဟာမှာမည်သည့်အဆင့်ဂိမ်း၏အရည္အခ်င္း။ အခါသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရာအရပ်ကစားပွဲအတွက်အဓိကအားဖြင့်အားကြီးသောလက်၊နှင့်အတူစစ်ဆေးနည်းသောသူဖြစ်လျှင်၊သင်လိုအပ်မှအလားတူပြုမူ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ထင်လိမ့်မည်ကြောင်းဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု အပြုအမူဟာအတော်လေးင့္ကန္၊သင်သည်ကိုယ်ဂိမ်းအကူျ။ တစ်ဦးဖမ်းမိ-ဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်နိုင်ပါသည်သင်သိသိသာသာပိုဒေတာတွေကိုသင်ထင်ထက်။ အ ၄ နပ္၊အခါပြန်လည်စစ်ဆေး၊သင်မေးသင့်ပြိုင်ဘက်မေးခွန်းကို:သင်ရှိသည်ကိုရှင်ဘုရင်၏လက်၌ရှိ? ။ အပေါ်စစ်ဆေးအလှည့်တစ်ဦးအနုတ်လက္ခဏာအဖြေ၊နှင့်အလောင်းအတည်ပြုရန်သင့်၏ပါဘဲ။ ခိုင်ခံ့သောပြိုင်ဘက်အသုံးချနိုင်သောသင်၏တုံ့ပြန်မှုစစ်ဆေး၊သူတို့စတင်မည်ပေးခြင်းမင်မှား။ ဒီမျဉ်း၏ဆန့်ကျင်ကစားနည်းအတိုက်အထိရောက်ဆုံး။ စစ်ဆေးနည်းအလက်များနှင့်အစောင့်များအတွက်အချက်အလက်မှသင်၏ပြိုင်ဘက်။ နောက်ထပ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်အတည်ပြုနည်းငြားလည်း၊ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်။ နှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောလက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ထိပ်တစ်စုံ၊သင်လုပ်နိုင်သည်လုံခြုံစိတ်ချစွာစစ္ေမီ၊နှင့်အတူအနည်းအလက်ကို၊သင့်နေရာအလောင်းကောက်အိုးရှေ့တော်၌ဖွင့်။.
ဒေါင်းလုပ်အ ၂၄ နိုမိုဘိုင်းအက်ပ်နှင့်ပန်းသီး၊
သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်မိုဘိုင်းအက်ပ်အပေါ်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ နှင့်တပ်ဆင်ရန် ၂၄ နိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၊အလျှောက်လွှာအပေါ်ဆန့်ကျင်-ပိတ္ဆို။။။။။ ၂၄ အလောင်းကစားခန်းမမည်သည့်လောင်းကစားနိုင်ကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအတွက်ခေတ်နှင့်ဂန္ပေါက်စက်များ။ ေဖြႏိုင္သည္သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နစ္ခုမှနာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်စားပွဲပေါ်မှာကဒ်နှင့်လောင်းကစားဂိမ်းများ:ကစားတဲ့၊ဖဲ၊အင်္ဂလိပ်နှင့်အခြားသူများ။ မည်သည့်အစားသူ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိအများစုမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီးပိုက်ဆံဝင်ငွေစတင်ရန်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးမည်မဟုတ်ထက်ပိုယူတဆယ်စက္ကန့်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရွေးချယ်မှုမှမှတ်တမ်းတွင်ကနေတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်၊ရိုးရှင်းစွာမှတ်ပုံတင်။ သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်ကစားရန်လောင်းကစားရုံဂိမ်းများအပေါ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၊အ ၂၄ မိုဘိုင်း။ ထည့်သွင်းဖို့ရန်ပုံငွေများကိုသင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုအသုံးပြုရန်အောက်ပါငွေပေးချေမှုစနစ်များ:သက်သေပြ-နှိပ်ပါ၊ အွန်လိုင်း၊စသည်တို့ကို။ အ ၂၄ အက္ပ္ကိုအဝဗားရှင်းဂိမ်းကလပ်များအတွက်အဆင်ပြေလက်ရှိပစ္စည်း။ သဟဇာတနှင့်အတူအားလုံးထုတ်ကုန်များအပြေးအန္းနှင့် ။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုထောက်ခံပါတယ်သာ ၊ဒါပေမယ့်လည်းဘတ်ဂျက်ဖုန်းများ။ သေချာစေရန်တည်ငြိမ်တဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ ၂၄ ဆာဗာ၊၃ ၄ ရန္သအင်တာနက်ကိုလက်လှမ်းလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်။ သင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူလူကြိုက်အပေါက်စက်များအပေါ်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ၏။ ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးတပ်ဆင်ခနှင့်ပင္ဆင္မွဳအစီအစဉ်၏။ ထို့အပြင်၊ဆော့ဖ်ဝဲကိုေဒါင္းမှအရာရှိနှင့် ။ အသုံးပြုသူများ၏ပြတင်းပေါက်များနှင့်မက်-အခြေခံကွန်ပျူတာနှင့်တာႏွင့္လက္ေတာ့မ်ားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အ။ မကြီးဆိုက်ကနေ၊ဒါပေမယ့်တစ်အရေအတွက်၏အားသာချက်။ ပထမဦးဆုံးကအာမခံပါ၏လျှို့ဝှက်ချက်များဖောက်သည်'ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်။ ဒုတိယအ၊ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမလပ်လှည့်လည်-အ-နာရီမှဝင်ရောက်ခွင့်ကက် ပေါက်စက်များ။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့အရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်လာခဲ့သည်၊အကိုသွားပါ အပိုင်း။ ရှိပါတယ်၊သို့သော်၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အထူးဖိုင်ကို။ ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်၊အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အလျောက်စတင်ပြီးစီးအတွက်ကမိနစ်အနည်းငယ်။ ကြာချိန်ပေါ်မူတည်အနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ။ ယနေ့တွင်၊ကုမ္ပဏီတွေကိုဖန်တီးနစ္ခုပိုကောင်းအားလုံးသူတို့ရဲ့အသစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အထိအပြားမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ။ အော်တိုစက်စွာဒေါင်လိုက်နှင့်ရေပြင်ညီရာထူး။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကကစားအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာဖြစ်လာသည်နှင့်အများကြီးပိုအဆင်ပြေမှတစ်ဦးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း။ မင်း ၅ နည်းပညာဖြင့်သဟဇာတဖြစ်အားလုံးစနစ်များ၊ဒါကြောင့်အမှားများနှင့်အမှားများမှာအလွန်ရှားပါးလျှင်သူတို့ပေါ်ပေါက်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အ ၂၄ ဆာ့ဖ္ဝဲကန့်သတ်။ သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူထီ၊ရနှင့်၊ရာထူးနှင့်ဆုကြေးငွေ။ အားလုံးဒီမှာရရှိနိုင်လိမ့်မည်၊မည်သည့်အချိန်၊သင်သွားလေရာရာ၌။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အားသာချက်အတွက် မိုဘိုင်းဗားရှင်းပါရှိသည်။ အခမဲ့နစ္ခုအခွင့်အလမ်းပေးအတွေ့အကြုံမရှိသေးဂိမ်းကစားဖို့မာစတာစည်းမျဉ်းနှင့်အဓိကသော့ချက်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးသောပေါက်စက်များအန္တရာယ်မရှိဘဲ။ သို့သော်၊မည်သည့်အချိန်ကန့်သတ်ဖယ်ကျဉ်ကြပါတယ်။ ဖြည့်ဆည်းဖို့ဟန်ချက်၏အသွင်ဒင်္ဂါးပြား၊သင်လိုအပ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း။ အားကစားစတင်၊ ၂၄ နိုပြီးတော့မှတ်ပုံတင်အကောင့်တစ်ခု။ ကလပ်ရဲ့ကက်အဆက်မပြတ်ရေးသားနှင့်အတူသစ်ကိုထုတ်ကုန်များနှင့်အထူးသီးသန့်စီမံကိန်းမှဦးဆောင်။
အရေးမှာ ဖဲ ကုန္သြယ္သ
ခေါင်းစဉ်၏အ အသုံးပြုထားသောဆော့ဝဲအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်သည်တက်ကြွစွာဆွေးနွေးအပေါ်အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များ–အသီးအသီးချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်နှစ်ခုလုံးကိုအတိုက်အခံကစားသမားသူကေထာက္ခံတဲ့သူ။ တချို့ဖဲခန္းမ်ားလုံးဝခွင့်ကိုငြင်းကစားသမားများကိုသုံးဖို့အပိုဆောင်းဆော့ဖ်ဝဲကို၊အခြားသူများအလုပ်ပေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ခွင့်ပြုအချို့အကွာအဝေးဆော့ဖ်ဝဲကို၊အချို့အခန်းများကိုဖြည့်စွက်လွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားမှု၏။ ၊အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ဖဲခန်း၊ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူအမြင်တွင်ဤကိစ္စ၊အခန်းစကားကိုခွင့်ပြုရန်၎င်း၏ကစားသမားများအသုံးပြုထားသောဆော့ဝဲ။ သို့သော်၊နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေလိမ့်မည်ကောင့်သို့ယူအများ၏ထင်မြင်ချက်အသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုယ်သူတို့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊အားလုံးကစားသမားများအခန်းအထိဒီဇင်ဘာ ၂၅၍ယူလာဖို့အဖိတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်အမျိုး၏မဲဖြင့်ဝင်ရောက် အထူးအထူးနှုန်းများကုဒ်များအတွက်သစ်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်၊အသီးသီး။ သဘာဝ၊အသီးအသီးကစားသမားနိုင်မှသာအမြန်သူတို့ရဲ့အမြင်တာနဲ့။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်မဲေကနေဖြန့်ချိကွန်ပျူတာကိုအဖြစ်အခါမှာသစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများ၏အခန်းသို့မဟုတ်အရာက္ဇာဗားရှင်းအ ဂိမ်း။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုများအခန်းကိုချက်ချင်းကိုဖန်ဆင်းတစ်ကြိုတင်အကြောင်းထင်မြင်ချက်များ၏ကစားသမားတိုက်ရိုက်မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊ဒါပေမယ့်အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရ။ သဘာဝကျကျ၊ရလဒ်၏မဲဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သောကစားသမားယူလိမ့်မည်အစိတ်အပိုင်းထဲတွင်-အပျော်တမ်းများမှာအစဉ်အလာပြိုင်ဘက်၏ဆော့ဖ်ဝဲကို၊ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ထိုအကြ၏မျက်နှာသာအတွက်၎င်း၏။ ထို့ကြောင့်၊ နိုင်ဆင်းသွားသည့်လူကြိုက်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်ခေတ်သစ်အွန်လိုင်းဖဲချပ်၊အဓိကအာရုံစူးစိုက်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမား၏၊မပေါ်အပျော်တမ်းကစားသမားနေစဉ်၊အများဆုံးဖဲခန္းမ်ားလိုက်နာရန်ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်အလက်မူဝါဒ၊အဆက်မပြတ်ရှုပ်ထွေး"အသက်"၏ပုံမှန်။
ဤအစီအစဉ်များနီးပါးတူညီ၊ပြန်လည်သုံးသပ်၏သူတို့ထဲကတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆို၏။ငါပြန်လည်သုံးသပ်အလုပ်ငန်းဆောင်ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသုံး၊မပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအစီအစဉ်၏။ ငါတောင်းပန်သည်အသံ၊ဒါပေမယ့်ကိုမလိုချင်ခဲ့ပြန်ပြင်ဗီဒီယိုများအတွက် ၄။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက် ။ကျွန်တော့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တြက္ ၈၈၈။ ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အရင်းအမြစ်များဏန်း:အပေါ်လျှော့စျေးငါ့ အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ချပို့စ်ဓါတ်နှင့်အကြို-ညႇပ္ဖိ။ ဒီအရုပ်သံလိုင်းမှဆက်ကပ်အပ်နှံများနှင့်သာဖဲချပ်။ အဘယ်သူမျှမတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအရာအပေါ်ကျုသောရာထူးနေရာ။!
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်သောတစျအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြားသင်ပြဿနာများကွုံတှေ့ရအပြေးလာသောအခါ ၈၈၈ ဖဲချပ်။ အဘယ်သူမျှမမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါသည်၊ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ၊ဒါပေမယ့်အလျင်စလိုမပြုပါနဲ့ထိတ်လန့်၊အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောပြဿနာများနှင့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့ပြဿနာ။ လျှင်သင်ပြဿနာများရှိသည်ပစ်လွှတ်အပ္သည္၊ဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊အဆိုပါစာရင်း၏အဓိကပြဿနာများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုဖြေရှင်းဖို့အ:။ အာရုံစိုက်ဖို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်ထောက်ခံ။ ပြီးထောက်ပံ့ကြဘူးအ ၈၈၈။ အများအားဖြင့်၊အရံုးလက်ခံရရှိ။ လျှင်ဒီအဖြစ်ပျက်မပါဘူးသို့မဟုတ်သင်မကျင့်လျှင်သိအများဆုံးမကြာသေးမီဗားရှင်းအစီအစဉ်၏တပ်ဆင်ထားသည်၊ ေဒါင္းကနေတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တပ်ဆင်အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမည်သို့အပေါ်ဒေါင်းလုဒ်တပ်ဆင် ၈၈၈ လိုင်းဖဲချပ်။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့် ၈၈၈ ဖဲဘူးဖွင့်လှစ်မည်အကြောင်းပြေးလိုင်းအုပ်ချုပ်သူအဖြစ်။ အစုအမြဲတမ်းယာလိုင်းအုပ်ချုပ်သူအဖြစ်၊သင်ညာဘက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပ္လိုက္ပါ၊ဂုဏ်သတ္တိများကိုမီနူးကိုနှိပ်ပါ"မံခန့်ခွဲသူအဖြစ်င့်"မှာ"လိုက်ဖက်"။ အချို့ဗိုင်းရပ်အစီအစဉ်များပိတ်ဆို့နိုင်နှစ်ဦးစလုံးလိုင်းဝင်ရောက်ရန်ဆာဗာနှင့်အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးအဖြစ်။ သေချာအောင်ကြောင်းလိုင်းသည်အဆိုပါစာရင်း၏ချွင်းချက်အဘို့အစီအစဉ်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်ယီပိတ်ထားသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားအပြီး၊ထွက်ကြိုးစားလိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အ ၈၈၈ ဖဲချပ်လိုင်းလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါအချို့ကိုအတွက်ဂိမ်းရိုက္ကူးေဘဲကာတွန်းပါတယ္။ ဒါဟာဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်'တမ်းပလိတ်:ထိပ်၌အနူးအလိုင်း၊"မြန်မာဘာသာ"၊ထို့နောက်"အချက်အလက်ဂိမ်းအတွင်း"နှင့်စစ်ဆေးခြင်းအကွက်ထဲမှာ"စႏိုင္သည္ကာတွန်း" အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှစစ်ဆေး၏ကျန်းမာရေးအဖို့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစား။ ကြိမ်ရှိပါတယ်သည့်အခါအင်တာနက်သည်မတည်၊ဤကိစ္စတွင်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှစစ်ဆေးအလုပ်လုပ်-အသုံးပြုမှုအမိန့်လိုင်း:ပွင့်လင်းအရင်ခံအတွက်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ပင်း-တီစစ္ေဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတည်ငြိမ်တဲ့အင်တာနက်သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အဆက်မပြတ်အပင်းမရှိနှင့်အတူပက်ကက်အရှုံး။ လျှင်ဆက်သွယ်သည့်၊ဒါပေမယ့်ပြဿနာတွေဇွဲ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ဖဲထောက်ခံမှုအခန်းဝန်ဆောင်မှု။ ဒါဟာဖို့အကြံပြုလိုချိတ်တစ်ပုံနှင့်အတူအမှားအမည္အမည္။ တခါတရံ ၈၈၈ ဖဲအမရကြောင့်အနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အပေါ်ဆာဗာကို၊သို့မဟုတ်ရှိတစ်ဦးမတည်မငြိမ်စစ်ဆင်ရေးကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်လင့်ခ်ကိုအသာပုတ္ပါ။ ဤအမှု၌၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါခ်ိတ္ဆက္ေဖဲအခန်း။ ဖဲအခန်းအမည်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ပေးလျှင်ကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံတားမြစ်သည်သင့်နိုင်ငံအတွက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်အသုံးပွုနိုငျအမှန်၊တစ် ဝန်ဆောင်မှု၊သို့မဟုတ်ဘြတ္ဆာက္ထားေသာ ။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပေမည်ပိတ်ဆို့ဖို့လက်လှမ်းဆိုက်ကနေကစားသမားတွေအဘို့အအချို့သောနိုင်ငံများ။ ထိတ်လန်ကြပါဘူးကြောင့်၊နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ကိုေက်ာ္ေဤကန့်သတ်:အမှား"မ"မကြာခဏတွေ့ရှိပါတယ်သည့်အခါပြဿနာများနှင့်အတူအင်တာနက်သည့်အခါသို့မဟုတ်အခန်းအပိတ္ခံအားဖြင့်ပံ့ပိုးပေး။ ဒီအမှားစေခြင်းငှါလည်းပေါ်လာလျှင်အဆာဗာကိုယာယီမရနိုင်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ။ ပါကပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်အပေါ်အစိတ်အပိုင်းများပေးကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှု၊သို့မဟုတ်အခြားရရှိနိုင်။ လျှင်စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး ၈၈၈ ဖဲချပ်မစတင်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ။ ပထမဦးဆုံး၊သင်သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ဖုန်းနှင့်ကိုက်အနိမ့်ဆုံးစနစ်ကလိုအပ်ချက်များ:သင့္ဖုန္းအသင့်လျော်သည်၊ထို့နောက်သင့်စစ်ဆေးမှုများသင့်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ကြိုးစားပြေး ၈၈၈ ဖဲချပ်ကနေတဆင့်ဝိုင်။လည်း၊ကြိုးစား အ ၈၈၈ ဖဲမိုဘိုင်းအက်ပ်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းပါ။ သင်သည်ဤလုပ်နိုင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကူညီပါ။ စစ်ဆေးချက်အလက်များသင်ဝင်ကိုစစ်ဆေးပြီးထပ်ကြိုးစားပါ။ လျှင်သင်မေ့သင့်စကားဝှက်ကို၊ ကပုံစံကိုအသုံးပြုပါင့္ခ်က္။ အလားတူအမှားပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါလျှင်သင်တို့အထဲထဲကလိုင်းမှားယွင်း။ ဤအမှု၌၊သင်ဆက်သွယ်သင့်အ ၈၈၈ ပံ့ပိုးဝန်ဆောင်မှု၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူပြဿနာ။ ဆက်သွယ်မှုယာယီမရနိုင်ပါ။ ကြိုးစားဆက်သွယ်အပြန်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်ဆာဗာအမည်ကိ်မ္စာ၊သို့မဟုတ်ပြဿနာကိုနှင့်အတူရှိ၏။ ရုရှားဥပဒေပြဌာန်းတားမြစ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံအ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အသုံးပြုခံရဖို့ပိုလွယ်ဝင်ရောက်ဖို့ဖဲချပ်ဆိုဒ်များအပါအဝင်၊၈၈၈ ဖဲ၊ဘဲပိတျဆို့ထားခံရ။ ကိုပံ့ပိုးပေးသူ-၊၊သို့မဟုတ် -ရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအသုံးပြုပါ။ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇၊အားလုံးရုရှားပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်သည်အဖြစ်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်သတ်မှတ် ။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေကိုမဝေကတည်းက၊သင်လက်လှမ်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၈၈၈ ဖဲကိုကျော်လွှားရန်။ အများအပြားရှိပါတယ်။ ပါကတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အတော ၈၈၈ အစီအစဉ်ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်၊ပထမဦးဆုံးကြိုးစားပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်။ ပစ်လွှတ်သို့မဟုတ်ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦးထံမှကွဲပြားခြားနားသော။ ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့သည်? ကလက်လှမ်း ၈၈၈ ဖဲဆဲကန့်သတ်အတွက်ရုရှား? ပြီးတော့ကိုယ်ကအားလုံးဆော့ဝဲလိုမျိုးနဲ့၊။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ထိုရှစ်ခန်းမဖြစ်စေခြင်းငှါဝန်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး။ ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်-"ချိတ်ဆက်"အဆိပ်ကမ်း။ အင်တာနက်ပေါ်မှာအလွယ်တကူရှာကန်ခြေလှမ်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်များအသီးအသီးစက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိရိယာ။ ထို့အပြင်တော ၈၈၈ ဖဲချပ်စီအစဉ်မစတင်လျှင်ကွန်ပျူတာအလုပ္လုပ္ေ။ စႏိုင္သည္တာဘိုည့္ခ။ လျှင်သင်အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများကို၊သွား➡"ဆက္တင္"➡"ပြပွဲအဆင့်မြင့်ဆက်တင်များ"။ အဘာင္ေဖွင့်လှစ်။ အထဲတွင်ရှာတွေ့၊အလယ် "တာဘို"➡"အမြဲ"။ သင်အော်ပရာ။ တာဘိုလည္းကူညီ။ သည်ဤရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊လျှင် ၈၈၈ ဖဲပိတ္ဆိုကိုပံ့ပိုးပေးသဖြင့်၊ကိုယ့်ကိုတပ်ဆင်တာဘိုသာ အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုအများဝင်ရောက်ဖို့ ၈၈၈ ဖဲခံရမပါဘဲပိတ္ထားေအားဖြင့်တစ်ဦးရုရှားကပံ့ပိုးပေး။ ဒီနည်းလမ်းသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အများအတရားဝင်ဆိုက်၏အခန်းမှတိုင်းပြည်အဘယ်မှာအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သာလိုအပ်ပြောင်းလဲမှုကို လိပ်စာများသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ။ ဒီနေရာမှာအချို့၏လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်များအကြားခြားနားချက်တစ်ခုနှင့်အသံုးျပဳျခင္းသောဝဘ်ဆာဗာမဖုံုးအသွားအလာ၊နှင့်အတုကွန်ယက်ပါဘူး။ လည်း၊ပဳႏိုင္သည္အားမကြာခဏအကြောင်းရင်း၏"နှေး"အဆိုပါစစ်ဆင်ရေး၏ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို။ မေးမြန်းသည့်အခါမည်သို့ကျော်လွှားကိုပိတ္ဆို၏၈၈၈ ဖဲဆိုက်၊အချို့သောနေဆဲအကြံပြုလိုသုံး ။ ဤအထူးကိရိယာလိုင်းအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အထူးပြုဆိုက်များပုန်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံရဲ့တည်နေရာကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ။ လူကြိုက်များ ဆိုဒ်များစဉ်းစားနေကြတယ်။ မိမိတို့အစစ်ဆင်ရေး၏နိယာမရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ တျော၏နာမကိုထည့်ပြီးသုံးရှစ်အတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာလိပ်စာဘားတန်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်! သို့သော်စိတ်ကိုထားကြောင်းလည်းသူတို့အဆိုးကျိုးသက်ရောက်၏အမြန်နှုန်းသင့်ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ ဒါဟာမခက်ခဲသည်ဖွင့်ရန်အဖဲခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်လျှင် ၈၈၈ ဖဲပိတ္ဆိုကိုပံ့ပိုးပေးသဖြင့်မအားဖြင့်တစ်ဦး လိပ်စာ၊ဒါပေမယ့်ကနေတဆင့် ဝင်တစ်ဦးဒိုမိန်းနာမည်အတွက်အမည္ပ်က္စာ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအတွက်ချိန်ညှိချက်များ၊ပြောင်းလဲသော လိပ်စာ။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းပြတင်းပေါက်ပးစြမ္းပါသည္ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဒီလိုလုပ်ဖို့။ ဝက်ဘ်မှာသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေသင့်။ နောက်တစ်ခု၊အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ"ပရိုတိုကောဗားရှင်း ၄၄"။ တစ်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အရာအတွက်သတ်မှတ် ၈။၈။၈။၈ ၈။၈။၄။၄ နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ"အင္း"။ ပြန်စတင်သည်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို။ ထိရောက်သောအဖြေလျှင် ၈၈၈ ဖဲချပ်ဂိမ်းလိုင်းမစတင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်တူးရ္။ ဒါဟာကျိန်းသေပွင့်လင်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုအခြားဝန်ဆောင်မှုများမဖွင့်။ အ ၈၈၈ ဖဲချပ်လိုင်းအစီအစဉ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးမှုကြောင့်အရပ်ရပ်! ဆော့ဝဲ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြော်ငြာ-သတိထား၊၊၊လုပ်ကွက်ဂိမ်းအခန်းလိုင်းကနေဆက်သွယ်မနှင့်အတူ။ သင့်ရဲ့ဗိုင်းရပ်ချိန်ညှိထည့်သွင်း ၈၈၈ ဖဲသင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရ ။ "ပျူ"ကိုလည္းမတပ္ဆင္ရန္မစတင်? ပိတ်အစီအစဉ်။ လျှင်အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကိုသင်ကြိုးစားဒေါင်းလုဒ်အ ၈၈၈ ဖဲချပ်စီအစဉ်ကနေအကြေးမုံ အတိအကျကော်ပီကူး၏အဓိကပေါ်တယ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အဘို့နှင့်ရုရှား။ အခုအချိန်မှာ၊အမှန်အောက်ပါအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် ၈၈၈ ဖဲချပ်:ဟုတ်ပါတယ်၊မှန်၏တရားဝင်ဆိုက်၏သုံးအင်္ဂုတ္တများပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် ချို့သောအချိန်ပြီးနောက်။ သို့သော်၊အသစ်သောဆိုဒ်များချက်ချင်းပေါ်လာ-ပြင်ဆင်နေတယ်လို့၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစား ၈၈၈ ဖဲချပ်မပါဘဲဒေါင်းလုဒ်ချဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အပံ့ပိုးပေးရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်း၊အကြေးမုံအသုံးဝင်သည်! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစတစ်ဦးရှိပါတယ်-အခြေခံဗားရှင်း၏အခန်း။ သင်တို့သည်လည်းဒေါင်းလုဒ်မိုဘိုင်းဗားရှင်း၏အခန်းမှတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကြေးမုံ၏အင်္ဂုတ္တ။ အခြေခံမူများအ အတွက် ၈၈၈ ဖဲမိုဘိုင်းအက်ပ်အဖြစ်အတူတူနှင့်အတူဖြန့်ချိဗားရှင်း။ တခါတရံအခါအ ၈၈၈ ဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုင်း၊ကစားသမားပြဿနာများရှိသည်–ပြတင်းပေါက်တပ်ဆင်ခနှင့်အတူအမှားပေါ်လာ။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊သင်တစ်ဦးထဲအတွက် ၈၈၈။ အချို့လူများကထင်၊"ငါကကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမစနိုင် ၈၈၈ ဆိုက်၊ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။" ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အတွက်၊အမှားအယွင်းဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်သောကြောင့်၊အရင်ဆော့ဖ်ဝဲကို၊သို့သော်ကြောင့်ပြဿနာများအပေါ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ဒေါင်းလုတ်အ ၈၈၈ ဖဲချပ်တပ်ဆင်ဖိုင်ကိုမအက၊ကမဆံ့တဲ့။။။။။ မကြာခဏသုံးမှန်၏လူကြိုက်အဖဲခန္းမ်ားကိုပြန့်ပွားဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်ရှိသည့်အစီအစဉ်။ သူတို့ကမြှင့်တင်ရန်သူတို့ရဲ့အတုစာမျက်နှာအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်စေတဲ့၊သင်စဉ်းစားရန်ရှိသည်သွားဖို့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏၈၈၈ ဖဲနေစဉ်၊တကယ်တော့သင်အပေါ်ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်မှရှောင်ကြဉ်ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်အမှား–အစဉ်အမြဲဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုမှာကဆိုက်ရဲ့လိပ်စာဘား။ တွေ့မြင်လျှင်၊ထို့နောက်သင်တို့ပြုအရာအားလုံးနဲ့အမှန်ကိုအပေါ်များမှာတရားဝင်ဆိုက်၏အခန်း။ တွေ့မြင်လျှင်သင်ကွဲပြားခြားနားဒိုမိန်းအမည်၊လိပ်စာဘားတန်းကိုပိတ်စာမျက်နှာနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဘာမှမဒီဆိုက်ကနေ။ အကျဉ်းချုပ်မှာ၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖို့သို ၈၈၈ ဖဲခန်း၊ပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်တပ်ဆင်ဆိုက်မှသာတရားဝင်ဆိုက်။ သို့သော်ရှိတယ်၊အခြေအနေများမှာအခါသင်ရှိသည်သောသေချာဒေါင်းဖဲခန်းလိုင်းကနေတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းလိုင်းနှင့်ဝင် ဒါဟာလည်းမဆန်းဖို့ပျက်ကွက်မှာ ၈၈၈ ဖဲချပ်။ သုံးစွဲသူများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများကိုအပြေးအသံလည်ပတ်ရေးစနစ်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအမျိုးမျိုးသောအမှားအခါမှဝင်ရောက် ၈၈၈။ ဤသူတချို့ကအမှားအယွင်းစဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်တပ်ဆင်ခ၏အ ၈၈၈ လိုင်းနေစဉ်၊အခြားသူများစဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်ပြတင်းပေါက်စတင်တည်ထောင်သို့မဟုတ်ပိတ်မှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေဖိုင္မ်ား၊မဲတုိက္ဆုိင္မႈခြင်း၊သို့မဟုတ်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ဖိုင်ကိုလည်းပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ။ အချို့ဗိုင်းရပ်စီအစဉ်များကိုတခါတရံတွင်ပိတ်ပင်ပင်မကူးစက်ခံရတဲ့ဖိုင်တွေ။ သေချာမဟုတ်ကြောင်းအကြောင်းရင်း၏အမှား၊အသုံးပြုခြင်းထိုအခါအောက်ပါသမ်ဖယ်ရှားရန်ပြဿနာကို။ ပြီးနောက်အပေါငျးတို့ခြေလှမ်းများဖြည့်စွက်၊သင်ဧကန်အမှန်နိုင်သို ၈၈၈ ဖဲချပ်။ လှမ်း ၃:သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ၏မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များယာယီဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကိုအသုံးပြုထူးဆော့ဗ်ဝဲ။ အဆင့် ၆:တိုင်းလိုက်နာနှင့်တပ်ဆင်အ ၈၈၈။ မနိုင်လျှင်တပ်ဆင်အဖဲချပ်လိုင်း၊ကကြိုးစား ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ကိုတပ်ဆင်အပေါ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခန်းကိုနောက်တဖန်အ၊မထည့်သွင်းမီ၊ပိတ်အ။ သင်စရာမလိုလိုက်နာဖို့လုံးဝအားလုံးအဆင့်မီဖို့ကြိုးစားနေအတွက်အထဲကို ၈၈၈ ဖဲအခန်း။ ကြိုးစားဖွင့်ဖို့လိုင်းပြီးနောက်အသီးအသီးအဆင့်။ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြရင်ဖွင့်လှစ်ရန်အအက္ပ္ကိုမဆိုအတွက်ပထမဦးဆုံးရှစ်ဆင့်၊သာထို့နောက်တပ်ဆင်။.
ေခတ္မီသူရုံနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအွန်လိုင်းဖဲချပ်သို့မဟုတ်အထိပ်အမြင့်ကန့်သတ်ပုံမှန်၊ထိုသို့မြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲဖဲချပ်ကစားခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းနပ္၊အလှည့်နှင့်အမြစ်။ ဒီကစားသမားတွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအသိုင်းအကတ်များအပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ၊အားလုံးပေါင်းစပ်ထားကြပါတယ်သီးသန့်အနေဖြင့်အကြောင်းကတ်များများမှာမိမိတို့လက်ကို။ ဒါပေမယ့်ဒီအအတိအကျဘာကိုခဲ့သည်တစ်ချိန်ကလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများဤကဒ်ဂိမ်း–ငါး-ဖဲချပ်ကဒ်သို့မဟုတ်အဖြစ်လည်းခေါ်ဆွဲဖဲချပ်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အဆများ၏အဆိုပါဂိမ်းကိုပြောင်းလဲပြီတဆင့်ရာစုထက်ပိုခွဲဖဲချပ်ရဲ့သမိုင်းသောကြောင့်၊ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခြင်းဒီဂိမ်းလောင်းကစားရုံအတွက်ရက်စွဲများကိုပြန် ၁၈၂၀။ ကြောင်းနေဆဲလာရန်ခေတ်မီအမြင်ချင်းဂိမ်း၏၊ပါဝင်သည်အားလုံးဖဲချပ်လက်များ၏အပြင်းထန်ဆုံးသောအဖြစ်၌ကျင်းပ ခဲ့တဲ့တော်ဝင်ဆေးကြောတော်မှဖြောင့်တီမှတစ်ဦး၊မေျပာင္းစိုးမိုးရေးအတွက်အဆုံးအဖြတ်ဆုရှင်ဖို့စွမ်းရည်ကိုအင်္ဂကိုသုံး၊သူတို့ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ။ ဒီဂိမ်း၏ဗားရှင်းရှိသောအခါ၊အဘယ်သူမျှမအသုံးကတ်များကိုဖွင့်၊ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း၏အဆိုပါဂိမ်းကိုကြီးပိုအရေးပါလာ။ အများကြီးပိုပြီးအာရုံစိုက်ပေးဆောင်ရပါမည်လေ့လာနေဖို့အတိုက်အခံ'ဂိမ်းအကြိမ်ကြိမ်သူတို့ရဲ့လိုင်းများကိုကစား၏၊သူတို့ဘယ်လိုကစားသူတို့အားကြီးသောနှင့်အားနည်းပေါင်းစပ်။ ဒီဆိုက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်မသာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အဆိုပါဂိမ်းကိုငါးဖဲချပ်ကဒ်၊ဒါပေမယ့်အားလုံးအရာကြွင်းလေ။ တစ်ဦးစံ ၅၂-ကဒ်ကၤန္အသုံးပြုသည်များအတွက်ဆွဲ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကစားသမားအဘယ်သူသည်အပေးအယူအကတ်များ။ နှစ်သင်တန်းသားများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ကြသည်တွင်မှဆက်ဆံရေးတွင်၎င်းတို့၏ရာထူး၊သူတို့ချက်ချင်းထိုင်၏ဘယ်ဘက်မှဖွင့်။ ကြိုတင်စတင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ကစားသမားအတွက်ဝန်ဆောင်သိုက်နည်းများသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏသို့အထွေထွေအိုး၊အရာများမှာ: သူတို့တက်အောင်ကနဦးဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်၏ဂိမ်းအတွက်၊အရာအားလုံးပါဝင်သူများ၏အမည်စတင်သူတို့ရဲ့ရန်ပွဲ။ ထိုကစားသမားကိုသူအပေးအယူကတ်ဟုခေါ်သည်၊နှင့်အနေအထားအပေါ်ထားတဲ့သူတည်ရှိသည်ဟုခေါ်သည်။ ရှေ့တော်၌ထိုဂိမ်းစတင်၊အသီးအသီးကစားသမားအလျောက်တစ်ကဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည်သူအကုန်အပေါ်ပထမဦးဆုံးကဒ်ဂိမ်း၏။ တနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကတ်မည်ဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးခလုတ်ကိုထည့်သွင်းအနေအထား။ ပြီးတော့ဒီအနေအထားလိမ့်မည်အပြောင်းတစ်ခုအလှည့်အတွက်ဘယ်ဘက်အခြမ်းကြောင်း၊အတံ။ ပါကကစားသမားမပင်တရံရှိပါက၊ထိုအခါခွန်အားသူ၏ပေါင်းစပ်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ဩကား၊အခွန်အမြင့်မားဆုံးကဒ်အတွက်။ ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီမည်သူသဘောတူသောကတ်များနှင့်မည်သူထည့်သွင်းဝန်ဆောင်မှု၊အားလုံးကစားသမားရရှိ ၅ ကတ်များကိုအသီးအသီး။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဖြစ်သင့်သူတို့ကိုမြင်။ အခါသင်တန်းသားများလေ့လာခဲ့ကြသူတို့ရဲ့ကတ်များ၊ပထမအကျော့၏ကုန်သွယ်စတင်သည်၊အကစားသမားထိုင်နောက်ကွယ်မှကိုတိုက်ရိုက်မျက်စိကန်း။ အလှည့်အတွက်၊သူတို့ခေါက်သူတို့ရဲ့ကတ်များ၊ပင်ထွက်သောပရောဂျက်၊သို့မဟုတ်လောင်းကစားလုပ်ပါ။ မြှင့်တင်ရေး။ နောက်တစ်ခု၊အဆိုပါရွှေ့သွားဖို့လာမယ့်အင္သူ၊နိုင်သူလည်းလုပ်ဆောင်တယ်ရှိသမျှတို့သည်အစာရင်းလုပ်ရပ်အဖြစ်ပြန်လည်အလောင်းကိုယခင်ကစားသမား၊သူလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့။ ပြီးတော့မှီတိုင်အောင်၊လူတိုင်းမှာစားပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ။ အဆုံးမှာလှုပ်ရှားမှုအတွက်၊ကစားသမားလဲလှယ်တက်မှငါးကတ်များကြောင်းသူတို့မကြိုက်ကြဘူး။ အားလုံးပြောင်းလဲသွားကြဘေးဖယ်ထားနှင့်မည်မဟုတ်လက်ခံလာမယ့်အတွက်ဆွဲ။ ကစားသမားအထားကိုငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကိုလဲလှယ်အဖြစ်ပေါင်းစပ်တတ်မေျ။ ပထမလဲလှယ်ဖြစ်ပါသည်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်၏ဒုတိယအကျော့အနည်းအကြားကျန်ရှိသောအတိုက်အခံအတွက်ဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခု။ ပါကကစားသမားလိုဘူး၊နေရာအလောင်းအစား၊သူသည်ညာဘက်ထိုင္ခဲ့သူလှည့်။ ရှိပါတယ်လျှင်တစ်ခုသာပါဝင်လက်ဝဲဂိမ်းအတွက်အဘယ်သူမျှမကြားရလဒ်အလောင်းအစား၊ထိုအခါအိုးချက်ချင်းဝင်။ ရှိပါတယ်သောအခါနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကျန်ကစားသမားတွေ၊အိုးချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည်ကိုသူပြသအင်အားအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်။ အကယ္ပေါင်းစပ်အတွက်တန်းတူဖြစ်ကြောင်း၊အိုးအပိုင္းအညီအမျှ။
ကျွန်တော်ပြုမိပါပြီအကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများ၏အလုပ်နှင့်ကောက်ခံမှသာအကောင်းဆုံးဖဲဆုကြေးငွေကနေအားလုံးသည်တည်ဆဲဖဲအခန်းပေါင်းအပေါ်အင်တာနက်သတင်းအချက်တယ်။ မသာအမြတ်အစွန်းဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှုကနေရေပန်းစားနှင့်အချိန်-စမ်းသပ်ပြီးလောင်းကစားအခန်းပေါင်း။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်ရွေးချယ်မည်သည့်အော်ပ၊စာရင္းသြင္းရ၊အပိုဆုသင်ကြိုက်အများဆုံး၊ကစားခြင်းကိုစတင်! သင်သိသည့်အတိုင်း၊၏ကျယ်ပြန့်အများစုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲကစားသမားတစ်ဦးအသက်မွေးကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်များအတွက်မှန်ကန်ငွေရှာစတင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပြီးတစ်ခုခုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမသိုက်သို့မဟုတ်အသိုက်ဆုကြေးငွေ။ ထို့ကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ဆင်သင့်သောကမ်းလှမ်းမှုသင့်အဘို့အလုံးဝအားလုံးရှိအမျိုး၏ဆုကြေးငွေနှင့်အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များအပေါ်မည်သို့ထိုသူတို့အားရ။ ကစားပျော်စရာရှိသည်မှာအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဇယား! အကောင်းဆုံးအဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲဆုကြေးငွေတစ်ဦးအထူးအမျိုးအစားများ၏အပိုဆုအစီအစဉ်ပူဇော်သောအားဖြင့်အကြီးဆုံးဖဲချပ်ဆိုက်များ။ သူတို့ကိုရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်၊သင်ရုံလိုအပ်ဖြည့်စွက်ရန်မှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတည်ပြုရန်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းအရေအတွက်ကို။ ပြီးနောက်ချက်ချင်းဒီရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊အတိအကျပမာဏကိုဤရန်ပုံငွေများကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ကိုအလိုင်းဂိမ်းရဲ့။ သင်ဖဲချပ်ကစားသူတို့အပေါ်သင်တန်း၏ဘောင်အတွင်းဤအဖွဲ့အစည်းနှင့်ထို့နောက်ထွက်ငွေသင့်အနိုင်ရဖို့ဘဏ်ကဒ် ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်။ အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအတွက်ဖဲချပ်အမျိုး၏အခမဲ့စမြို့တော်မှဖဲခန်းမများအတွက်စုဆောင်းအ နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်အောင်မြင်သောဖဲချပ်။ ဒါ့အပြင်၊ပထမဦးဆုံးအသိုက်$၁၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။ သင်အခွင့်အပိုဆောင်း ၁၀၀ ဆုကြေးငွေပမာဏ၏၊ထက်မပို$၄၀၀။ ၏လုပ်ငန်းစဉ်မခံအဆိုပါကြိုဆိုဆုကြေးငွေအတွက် ၈၈၈ ဖဲေထွက်ယူသွားတတ်အားဖြင့်စုဆောင်းတယောအရေအတွက်အပိုဆုအချက်များ၊အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အလျောက်ဂိမ်းအတွင်းအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ။ ထို့အပြင်၊အသစ်ရောက်လာမှအခန်းတစ်ဦးရရှိလိမ့်မည် ၁၀၀ အဘို့အပိုဆုပထမဦးဆုံးသိုက်တက်ရန်$၂၀၀၀၊၂ လက္မွတ္မ်ားစုစုပေါင်းနှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ငွေ$၈၀၀၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် ၅ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္အသီးအသီးအတွက်တန်ဖိုးရှိ$၀။၂၅အထိုင်နှင့်သွား။ အားလုံးသည်အနိုင်ရကျော်$၁၀ နိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်လပ်ဟုန္ထုိးထဲကမရှိကန့်သတ်အပေါ်ဤအကောင့်ကို။ တစ်ဦးက ၂၅၀ အပိုဆုကိုလည်းချီးမြှင့်ငွေ၊ဒါပေမယ့်ထက်မပို$၂၀၀၀၊မြန္လက်မှတ်မှအပတ်စဉ်အပ္ႏချန်ပီယံနှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၂၅၀ နှစ်ခုလက်မှတ်တွေကိုနေ့စဉ် ၊တန်ဖိုးရှိ$၁၅ နှင့်$၂၀။ နောက်ဖြစ်ဟန်ထည့်ထားကြသည်မှာအားကစားသမားရဲ့စွန့်ပစ်အတွင်း ၃ ရက်အချိန်တွင်ထံမှဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေမှအကောင့်ကို။ ချက်ချင်းပြီးစီးအပေါ်သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အောင်တစ်သိုက်$၁၀ ရန်လူတိုင်း ဒါဟာငွေပေးချေ၎င်း၏အသစ်ဖောက်သည်$၂၀ နှင့် ၁၂၄ လက္မွတ္မ်ားအခွင့်ထူး အခမဲ့ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူစုစုပေါင်းဆုချီးမြှင့်ငွေကနေစတင်$၁၀၀၊၀၀၀။ တဦးတည်းအခြေအနေများအတွက်ဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိသည်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖြည်ဖဲချပ်ပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခန်း၊အဖြစ်သတ်မှတ်အထူးနှုန်းများကုဒ် ၂၀။ ဆုကြေးငွေပမာဏသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်နှစ်ရက်အတွင်း။ ပြန်အနိုင်ရရန်$၂၀ အပိုဆု၊သင်စုဆောင်းဖို့လိုအပ် ၄၀၀ မှတ်ရှိသည် ၁၂၀ လက်ထက်ကနေအခုအချိန်မှာအသိုက်သက်ဆိုင်။ သို့သော်၊အဲဒီအကန့်အသတ်တစ်ခု–သင်သာကစားမှာငွေသားနှင့်အတူကျောက်ပြားကို၏ကန့်သတ်$၀။၁၀ $၀။၂၅ နှင့်အောက်။ ဒီအာ္ပေလည်းဆု ၁၀၀ အပိုဆုအပေါ်ငွေမှ$၂၀ရန်$၅၀၀၊အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးအဖြစ်င္ခြလက်မှတ်နှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၂၀၀၀။ ဖဲသိုက်ဆုကြေးငွေအမျိုးအစားဖြစ်ကြ၏ဆုကြေးငွေစဉ်အခါ၊ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသိုက်ရန်ပုံငွေ၏အဆိုပါဂိမ်းကိုချိန်ခွင်၊ကစားသမားအပေါ်ရေတွက်နိုင်၊အစားအထင်အပိုဆုများသောအားဖြင့်အထဲက ၅၀ ကို ၂၀၀၊နှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားကတခါတရံတွင်ထောင်အများအပြားရောက်ရှိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အပိုဆုအားဖြင့်ဖြန့်ဝေအားလုံးနီးပါးဖဲအခန်းပေါင်း၊ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်ထွက်အကောင်းဆုံးဖဲဆုကြေးငွေ။ နှင့်ဤအမူအသေးအဖွဲမတော်တဆမှုကြောင့်မှတဆင့်ထိုကဲ့သို့သောအပိုဆုကမ်းလှမ်းမှုလားအလာရှိသောဖောက်သည်များတဲ့ဆန္ဒကစားရန်ပို။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ဖဲအခန်းရရှိရန်ထွန်ခြစ်၊ပြီးကစားသမားကိုအနိုင်ရပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောပမာဏ။ နိုင်မှဆုတ်ခွာမည်သည့်ဖဲချပ်ပေါ်မှာဆုကြေးငွေသှေ၊သင်လိုအပ်အနိုင်ရမှ၊နောက်ကျောနေစဉ်ကောက်ခံတြင္းဧမှတ်ည့်ပမာဏအပေါ်မူတည်၏ထွန်ခြစ်။ ထို့ကြောင့်၊သင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊ပိုပြီးဆုကြေးငွေရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကယူပြီးအကြံပြုပါသည်သိုက်ဆုကြေးငွေသာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတွေ့အကြုံဖဲချပ်။ ။ အားလုံးအသစ်ရောက်လာကြတဲ့သူအပေါ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊တည်ပြုအီးမေးလ်လိပ်စာသတ္မွတ္ထားေသာအဆိုျပဳပုံစံ၊ငွေရန်ပုံငွေမှအကောင့်မှစတင် ၅၀၀ ပွတ်သပ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် ၁၀၀ အပိုဆု၊ဒါပေမယ့်ထက်မပို ၇၅၊၀၀၀ ပွတ်။ ေအာမခံအသိုက်ဆုကြေးငွေထံမှ ပေး ၉၀၏နေ့စွဲကနေရက်ပတ်လုံး။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အပိုဆုမခံအဆင့်အတွက်ကုန်၏ပရိုဖိုင်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအ"ေငြ"။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်။ အားလုံးအသစ်ကဖောက်သည်ချွင်းချက်မပါဘဲ၊အဖဲခန်းပြင်ဆင်တော်မူပြီတစ်ဦးအထင် ၂၀၀ ပထမဦးဆုံးသိုက်ကအပိုဆုတက်ရန်$၂၀၀၀၊၄ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကိုချန်ပီယံနှင့်အတူစုစုပေါင်း၏ဆုချီးမြှင့်ပိုက်ဆံအထိေဒၚလာ ၂၅၀၀ အသီးအသီး၊အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးအဖြစ်လက်မှတ်အတွက်$၁၀ လစဉ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊နှင့်အခွင့်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်နေ့စဉ် အရင်ကဆိုရင်များအတွက်။ အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲချပ်။ ၁၀၀ အပိုဆုမှတက်$၆၀၀ ထားသည်များအတွက်သီးသန့်ကိုအဘယ်သူသည်နယူးကစားသမားတွေငွေသွင်းငွေပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့။ ဒါဟာတရားစွဲဆိုအရစ်ကျ၏၁၀ ကိုကနဦးမြို့တော်သို့မဟုတ်$၂၀ဘယ်နည်းသည်။ ဒီအကောင်းဆုံးအသိုက်ဆုကြေးငွေသာအစမရွိအဖြစ်မမခံ။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အများဆုံးအစုဖဲသတင္းမ်ား၊ရိုးသားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်၏အကောင်းဆုံးဖဲအခန်းပေါင်းအပေါ်ဂြိုဟ်အနေဖြင့်လက်ရှိအောင်မြင်စားသမားခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အောင်နိုင်မှအသစ်ဖဲချပ်ထိပ်။.
၁။ ကစား၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အစားများတစ်ကုန်းပတ် ၅၂။ အများက်၏ကဒ်များအတိုင်း:အမြင့်မားဆုံးကဒ်ဖြစ်ပါသည်၊နိမ့်ဆုံးပမာဏစာမ်က္ႏွာ။ ၂။ ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်အနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်၊အိုးသောအလောင်းနေရာအတွင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်စုဆောင်းအကောင်းဆုံးဖဲချပ်၏ပေါင်းစပ်သင့်နှစ်ခုကတ်များနှင့်အသုံးရာင္းရန္-သာ။ ၃။ အဆိုပါဂိမ်းနှင့်အတူစတင်သည်နှစ်ယောက်ထိုင်ဖို့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောင်မဖြစ်မနေနည်းမှောင်မိုက်၌ဤအလောင်းဟုခေါ်သည်မျက်စိကန်း။ကစားများအတွက်ပိုက်ဆံအမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ရာအရပ်ကိုကြာအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်း။ ပထမဦးဆုံးစကားလုံးပိုင်ကစားသမားထိုင်၏ဘယ်ဘက်မှသူနေရာကိုကြီးမားမျက်စိကန်း။ ကစားသမားမှလက်ျာဘက်ရှိပါတယ်:-စွန့်ပစ်သူတို့ရဲ့ကတ်များအောင်မပါဘဲမည်သည့်နည်းရှောက်သွားသို့မဟုတ်အခေါက် -နေရာအလောင်းအလောင်း -အရွှေ့ထဲတွင်ကျန်ရှိနေသောနေစဉ်အဆိုပါဂိမ်းကိုစစ္ေသို့မဟုတ်စစ်ဆေး။ အစစ္ေတရားဝင်သည်ဆိုပါကစားသမားအတွက်လက်ရှိပတ်လည်ရှိပြီးသားအလုပ်စစ်ဆေးခြင်း။ အလောင်းအညီခဲ့သည့်အလောင်းအစားလုပ်ရှေ့တော် -င္တာကအလောင်းအစားသို့မဟုတ်အဖြေခေါ်သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ -အလောင်းအစားအမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်။ ကုန်သွယ်ထွက်ယူသွားတတ်သည်အထိအားလုံးကျန်ရှိကစားသမားဂိမ်းအတွက်အများကြားရလဒ်သူတို့နည်း။ အများအားဖြင့်၊နောက်တဖန်မသုံးထက်လည်ကျင်းပကြသည်။ ကစားသမားအဘယ်သူသည်အကြီးမျက်စိကန်းခဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပြောဆိုသည်။ နောက်ကစားပွဲရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း၊သူတို့သွားကြဖို့အိုး၊နှင့်ပထမသုံးရာင္းရန္-ဖည့္ကတ္ကိုထွက်ချထားစားပွဲပေါ်-အနပ္။ ၅။ ေျခညွပ္ဖိနပ္-အလှည့်-။နောက်တင်ထုတ်သုံးရာင္းရန္-တက်နပ္၊အဆိုပါကုန်သွယ်တောင်ပို့အဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကစားပွဲရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း၊သူတို့မှထပ်အိုးနှင့်စတုတ္ထကဒ်ဝယ်ယူထားသည္-ထိုအခါစားပွဲပေါ်လှည့်။ အဝိုင္းကုန်သွယ်၏ထပ်ခါတလဲလဲ၊ကိုကစားပွဲရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း၊သို့ပြောင်းရွှေ့အမှုဘဏ်နှင့်နောက်ဆုံးကဒ်ဝယ်ယူထားသည္-အမြစ်။ ပြီးနောက်၊အမြစ်သည်ထွက်ချထား၊တစ်ဦးလှည့်လည်ကုန်သွယ်၏စစ္တမ္းအရတူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊နှင့်ကျန်ရှိသောကစားသမားဂိမ်းအတွက်ထုတ်ဖေါ်သူတို့ရဲ့ကတ်များ။ ကစားသမားအဘယ်သူသည်စေသည်အကောင်းဆုံးဖဲချပ်ပေါင်းနှစ်ကဒ်နဲ့သုံးသိုင်းကတ်များအနိုင်ရ ဝယ်ယူစျေးနှုန်း။ အားလုံးကစားသမားတွေရှိသည်စွန့်ပစ်သူတို့ရဲ့ကတ်များ၊ေနာက္ဆံုးကစားသမား၌ကျန်ကြွင်းဂိမ်းအနိုင်ရ။ အစီအစဉ်အပထမဦးဆုံးစကားလုံးမှလက်လက်လှုပ်ရှားတံမှကစားသမားအားကစားသမား။ အဆင်ပြေများအတွက်ကစားသမားတွေ၊အဝိုင္း အပေါ်ထားရှိပြဲ-၊ညွှန်ပြ၏အမိန့်အလက်ပထမဦးဆုံးစကားလုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပ်နှံသည်ဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်အရာအားလုံးရန်။ နေ့တိုင်းကျွန်တော်ထည့်ျဖင့္ထုတ်ကုန်သစ်များ၏၊ဒါကြောင့်ဒီမှာလာပြီးမကြာခဏ။ အားလုံးသည်ဖိုင်များအဖြင့်ဘစ်ဒဖန်ဒါကိုဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှေ့တော်၌ထည့်သွင်းခံရဖို့။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ကျေးဇူးပြုကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကနေတဆင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံ။
ကိုယ့်တူေျခညႇပ္ဖိဂိမ်းများ၊ဂိမ်းလဲလှယ်ကြသည်နှင့်အတူကစားဝန်ဆောင်မှု။ အသီးအသီးကစားသမားအလျောက်ငါးမျက်နှာ-ဆင်းကဒ်ပေါက်ကတ်ကိုသာသူမြင်နိုင်ပါသည်။ ပထမကစားသမားဖြစ်ပြီးမျက်မခေါက်နိုင်၊ဖုန်းဆက်၊သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်။ အလှည့်ရွေ့လျားမွှောကျပတ်ပတ်လည်အပေါငျးတို့သပြဲအထိအားလံုးကစားပွဲတွင်ချထားပါသည်။ပြီးနောက် ပြီးနောက်ပထမအကျော့၏နည်းပြသည်ပြီးစီးသည့်အရပ်ကိုကြာ။ အခြားစကားများတွင်၊အသီးအသီးကစားသမားနှိပ်ဖို့ရွေးချယ်သောကဒ်များကိုစွန့်ပစ်ရှိလျှင်။ နှိပ်ခြင်းနောက်တဖန်အတစ်မြေပုံပေါ်တွင်ရှိသည်သောသားမှတ်သားလိမ့်မည်င့္လိုေ။အဆိုပါလဲလှယ်အတွက်နေရာယူနေတဲ့သင့္သည္။
ထိုသို့သည့်အခါသင့်အလှည့်ကိုပစ်ပယ်သင့်ရဲ့ကတ်များ၊သင်လိုအပ်မှခလုတ်ကိုနှိပ်ပါမှအတည်ပြုကြောင်းသင်လိုချင်တဲ့အပစ်ပယ်ဖို့ရွေးချယ်ထား။ပထမဦးဆုံးပြီးနောက်လဲလှယ်၊ဒုတိယအလောင်းလှည့်လည်ဖွင့်လှစ်၊နှင့်အတူစတင်ပထမဦးဆုံးအတက်ကြွကစားသမား၏ဘယ်ဘက်မှခလုတ်ကို။ ကြောင်း၊အဆက်မပြတ်များ၏လုပ်ရပ်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်း:၁။ အသီးအသီးကစားသမားအလျောက်ငါးကတ်များ ၂။ ပထမအကျော့၏အလောင်းနှင့်အတူစတင်ကစားသမား၏ဘယ်ဘက်မှကြီးမားကာ ၃။ လဲလှယ်ကဒ် ၄။ ဒုတိယအကျော့၏အလောင်းနှင့်အတူစတင်ကစားသမား၏ဘယ်ဘက်မှခလုတ်ကို ၅။ မစ္ထဲကဒ်ပြားလိုအပ်ပါကကစားသမားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကဒ်လုံးလက်အနိုင်ရရှိ။ ပြီးနောက်အိုးလွန်ပြီအနိုင်ရမှ၊လာမည့်ပတ်လည်၏ငါးကတ်ဖဲချပ်နှင့်အတူလဲလှယ်နိုင်။ရှိပါတယ်လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုညီလက်၊အိုးအပိုင္းအညီအမျှသူတို့ကိုအကြား ရှယ်ယာများ။ အခါအဆုံးအဖြတ်ဆုရှင်၊အများက်အစားကိုက်ညီသည်မဟုတ်အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွား။.
ဖဲအခန်းပေါင်း၊အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုဒ်များအတူတကွဆောင်ခဲ့မှလူအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းမှာကမ္ဘာသူတို့စားပွဲသည်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်-ဖဲချပ်ကစားရန်တူအသီးအသီးအခြားအားဖြင့်အင်တာနက်နည်းပညာများ။ အစအဦးကတည်းက ၂၁ ရာစု၊ဖဲအခန်းပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်အထူးသဖြင့်ခဲ့ကြရရှိမှုလျှင်မြန်စွာလူကြိုက်များ၊အစုအဝေးပိုပြီးသန်ကစားသမားတွေမှာသူတို့ရဲ့စားပွဲ။ ဤစာမျက်နှာ၏အများဆိုက်သင်တွေ့လိမ့်မည်အကောင်းဆုံး သာအခန္းမ်ား၊အခြေအနေ၊အဖြစ်အများအပြားဆုကြေးငွေသာအခန္း။ လျှင်သင်ရုံစတင်ဖဲချပ်ကစားရန်၊သင်တို့ကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်စာမျက်နှာအ အချိန်ဇယား။ အွန်လိုင်းဖဲချပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်သိရသည်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များအဓိကစွမ်းရည်ကြောင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ကစားရန်။ ဒါဟာဖဲအခန်းပေးကြောင်းသင်ဖို့အခွင့်အလမ်း သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်မှာဖဲချပ်ဇယား၌မဆိုစည်းကမ်းနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်။ ဖဲခန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်ကစားသမား၊မခွဲခြားဘဲ၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊အနိုင်ကစားဖဲချပ်နှင့်အတူအစစ်အမှန်ကလူများအတွက်ခြွင်းချက်ချစ်ပ်သို့မဟုတ်ငွေသား။ အများအားဖြင့်၊ဖဲအခန်းအဖဲဆိုက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့လိုင်း၊အရာ၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ကောင်းကင်ဗိုလ်တိုက်ပွဲမှာဖဲချပ်။ အများဆုံးအွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန္းမ်ားလည်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပ်များနှင့်အတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပိုင်းဖဲချပ်အခမဲ့ဖဲချပ်သည်ငါစက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိရိယာ။ အသီးအသီးဖဲခန္းမွတိကျတဲ့ကုမ္ပဏီအများဆုံးမကြာခဏအ ကြီးရုံး၊အရာပါရှိသည်န်ထမ်းများအတွက်တာဝန်ရှိလုပ်ငန်း၏ဆိုက်၊ငွေရေးကြေးရေး၊လုံခြုံရေး၊ကိုင်မှုများ၊ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊အများကြီးပို။ ဤအပိုင်းပါရှိသည်ကိုသာလူသိများ၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လူကြိုက်များအွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန်း၊အဖြစ်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လက္ရွိဦးဆောင်ရာထူးသိမ်းပိုက်အားဖြင့်ဖဲချပ်နှစ်ခန်း၊ ရေပန်းစားနေသောနှင့်အတူကစားသမားများအားလုံးမှကမ္ဘာကျော်သောကြယ်နှင့် ၈၈၈ ဖဲချပ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးကစားသမားနှင့်လည်းရှာဖွေနေအဘို့အသင့်တော်သောအခန်းမှစတင်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊သင်ကျိန်းသေကိုအာရုံစိုက်တစ်ခုမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖဲအခန်းများ၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊ထိပ်တန်းဖဲခန္းမ်ားသော၊ဒါပေမယ့်လည်းမပျောက်မ၏မျက်မှောက်အလျော့နည်းလူကြိုက်များသူများအဖြစ်၊သူတို့မကြာခဏအိမ်ရှင်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ပရိုမိုးရှင်းနှင့် ။
ကျေးဇူးပြုပြီးညွှန်ပြသည့်နေ့ရက်၊အချိန်နှင့်နေရာအဖြစ်အပျက်၏၊နှင့်ပြည်နယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာအချက်အလက်။ သင်ပူးတွဲဗီဒီယို၊ဓါတ္ပံု၊သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းမှ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပေးပို့ရန်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်၊ချိတ်ဆက်ထားသည့်လင့်ခ်အရင်းအမြစ်။ ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လျှင်သင်ပေးဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသွယ်သတင်းအချက်အရနိုင်အောင်ကျနော်တို့ထိတွေ့နှင့်အတူသင်နှင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပါ။ နွေဦးတွင်၊အစဉ်ကာလအတွင်း ကာလကို၊ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာများ။ ပြီးတော့အ ။ ဘတ်ဝန်ဆောင်မှုရောက်ရန်မိမိတို့အကူအညီ ပေးအပ်ခြင်း၏ထုတ်ကုန်များ။ သူသည်အပေါ်ယာယီအကိုင်များန်ထမ်းများအတွက်အပိတ်အကျွေးထူထောင်နှင့်။ သူတို့အလျင်အမြန်ဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားဝယ်လက်နှင့်စာ။ ထိုသို့သောတစ်ဦးဝန်ထမ်းများဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကူညီပေးသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြသဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစည်းအတွက်ခက်ခဲအခြေအနေ။ အခြားဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုဘယ်လိုအကြောင်းအစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့အသစ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုမီးရှို့ခြင်းငှါမသကဲ့သို့ထွက်နှင့်၊တစ်ချိန်တည်းမှာ၊ကူညီပေးဆရာဝန်များအတွက်ခက်ခဲအခြေအနေ။ တမြို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်စက်ချုပ်အားကစားဆိုင်ရာယူနီဖောင်းဖို့စတင်ထုတ်လုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးစက်ကိရိယာအတွင်းကတုပ်ကွေးရောဂါ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ဒါကြောင့်တိုးပွားလာခဲ့သည်၎င်း၏ဝန်ထမ်းများနှင့်အစီအစဉ်ရိုက်ထည့်ရန်အဥရောပစျေးကွက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ဖက္ရွင္ဆိုင္၊ နှင့် ။ အထွေထွေအတွက်၊တုပ်ကွေးရောဂါအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မြို့ရှိအမှန်တကယ်ရှင်သန်၏အမျိုးမျိုးသောအပြန်အလှန်အကူအညီစီမံကိန်း။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးအခမဲ့အစားအစာ။ စားေနဆဲပြင်ဆင်ထားအစားအစာငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုများအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်ဆရာဝန်၏။ ဘတ်ဆေးရုံတာဝန်ခံအခမဲ့။ အဆိုပါစီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့နွေဦးပေါက်ရာသီအတွက်ထိုအချိန်မှစ။၊အနိုင်ငံသားများမိမိတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီ:သူတို့ဘာသာ ပိုက်ဆံ၊အကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်နာ့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏သည့်အစားအစာများ၊အဆောင်အစားအစာ။ အခုရှိပြီးသားတစ်ခုလုံးအများအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအဘယ်မှာရှိမည်သူမဆိုများအတွက်ပေးဆောင်နိုင်အစားအစာဆရာဝန်တွေများအတွက်။ ထိုစီမံကိန္းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ဤသူအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ အပြားပိုရှိပါတယ်။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားသက်သေပြခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ကအတွက်အလွန်လျောက်ပတ်သောလမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းရင်းများစွာအဘို့အကောင်းမြင်၊အဖြစ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တစ်ခေတ်၊ဒီအကိုဆိုက်ဖို့အယွင်း။ ယခုထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။။။။။။
ကတ်များကိုအလျောက်အတွက်ဖဲချပ်အတွက်အချို့။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူးမှာအားလုံးသည်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသင်ဖဲချပ်ကစား။ ကိုင် '၊၊ငါးဖဲချပ်ကဒ်၊တူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလျှောက်ထား။ ဆိုရင်ဒီဂိမ်းဟာကစားအတွက်ဖော်ရွေလေထု၊ဘယ်မှာမျှမရှိအခန်းအတွက်ယုံကြည်များ၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊ထို့နောက်မည်သူမဆိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဆွဲဆုံးဖြတ်ပထမဦးဆုံး၊ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုဝင်တံ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးကစားဖဲချပ်ဂိမ်း၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ။ ပထမဦးဆုံးအရာသင်လိုအပ်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့တစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်စားပွဲလုံးကစားသမားထိုင်နိုင်တိတ်တဆိတ်နှင့်အငြိ။ ယခုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ကစားသမားတစ္ေပထမဦးဆုံးရောင်းချသူ။ အများစုကတော့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကစားသမားအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ပုံကြီးသို့မဟုတ်မဲအဖွဲ့။ တကယ့်အရေးမပါဘူးသည္။ ပထမဦးဆုံးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကြောင့်၊အရေးမပါဘူးမဆိုအမှု၌၊အားလုံးသင်တန်းသားများနေသောဂိမ်းအပြဲဖြစ်လာကုန်မှာတလမ်းတည်းသို့မဟုတ်အခြား။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ထို့နောက်ဒါခေါ်ရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊အရာမသွားပါစေလိမ့်မယ်သင်မေ့လျော့ဘယ်သူကအဖြစ်ရောင်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအသုံးပွုဖို့အထူးအချစ်ပ်ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်သည်တစုံတခုကိုယူချင်။ အဆိုပါကတ်များကိုအလျောက်တစ်ဦးလက်ယာရစ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေစတင်ကစားသမားအဘယ်သူသည်ပေါ်မှာထိုင်သောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်သို့မဟုတ်၊ပိုပြီးရိုးရှင်းစွာ၊အသေးစားမျက်စိကန်း။ ကတ်များကိုအလျောက်တစ်ခုသာတစ်ကြိမ်မှာအလှည့်အတွက်၊ကြောင်း၊မနှစ်တစ်ကြိမ်မှာ၊သို့သော်တဦးတည်းအချိန်တိုင်အောင်၊အပြင်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားလိုအပ်သောအရေအတွက်၏။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့မီအသီးအသီးပတ်လည်ဆက်ဆံရာတွင်အလဲအဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရမယ်ဖြတ်တစ်ကဒ်မှအကၤန္၊အပစ်အခြမ်း။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှောင်ရှားရန်တတ်နိုင်သမျှလိမ်လည်သို့မဟုတ်လှည့်ဖြားအပေါ်အစိတ်အပိုင်း။ အသီးအသီးကစားသမားအလျောက်နှစ်ခုကတ်များသောအိတ်ဟုခေါ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ကျွန်တော်တို့ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖဲ-အဝတ် '။ ပြီးနောက်အဆိုပါကတ်များကိုအလျောက်မှကစားသမားတွေ၊အသုံးကတ်များကိုတင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်၊အရာများမှာခေါ်ခညႇပ္ဖိ။ ပင်မှာအဆင့်၏ဖြန့်ဖြူး၏အိတ်ကပ်ကတ်များရှိပါတယ်၊တစ်လှည့်လည်၏။ နောက်လာမယ့်အပတ်အပေါ်ကုန်သွယ်နပ္၊ကဒ်ထုတ်ဘုတ်အဖွဲ့မှ။ တစ်ဦးတည်းသာကဒ်ထုတ်ပေးပြီးဟုခေါ်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကွေ့အမှတ်ဂိမ်းအတွက်အဖြစ်၊ဒါဟာအများဆုံးမကြာခဏအကျိုးသက်ရောက်ပေါင်းစပ်ကစားသမားစုဆောင်း၊အစဉ်အလာမယ့်၊ပဉ္စကဒ်၊မရှိသလောက်အကျိုးသက်ရောက်၏ရလဒ်။ လာမည့်ပတ်လည်အတွဲနေရာယူခုသာချန်ပြီး၊သောသူတို့အကစားသမားတွေအမှန်တကယ်ကောင်းပေါင်းစပ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ပြီးသားအပြည့်အဝသို့မဟုတ်ဆွဲယူ၊အတွက်မျှော်လင့်ကြောင်းအဆိုပါပဉ္စကဒ်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သက်ရောက်စေမည်သူတို့ကိုအရှည်လျား-စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော။ ယခုနောက်ဆုံးအကဒ်ကိုထုတ်ထားအပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ၊အမြစ်၊နှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်များလေလံရာအရပ်ကိုကြာသောပြီးနောက်ဆုရှင်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ တစုံတခုမျှမရှိလွန်းရှုပ်ထွေးအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လုံးဝမည်သူမဆိုမာစတာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ဒါဟာနောက်သို့လိုက်ရန်အရေးကြီးသောရှိသမျှကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဖေါ်နိုင်ရန်အတွက် ဂိမ်းအဖြစ်တရားမျှတပြီးစိတ်ဝင်စားစရာများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအပေါင်းတို့ကစားသမားတွေ။
ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းငှါ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ပိတ်ဆို့ခံရလိမ့်မည်သင်ဝင်ရောက်ဖို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသုံးစွဲတဲ့အရင်းအမြစ်သည်အကန့်သတ်ဖြင့်ပံ့ပိုးပေး။ ထိုအကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားနေပေမည်၊ဒါပေမယ့်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောမည်အကြောင်းဖြေရှင်းချက်ကို။ ကိုကျော်လွှားရန်အသုံးပွုနိုငျ န်ဆောင်မှုများ၊၊သို့မဟုတ်အခြားအထူးအတူးရ္။ ဒါပေမယ့်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့တရားဝင် ။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဗီဒီယိုမှအဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိထွက်ရှာရန်အဘို့အကြည့်တဲ့ဆိုဒ်မှန်ရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်:လိုလားသူတစ်ဦးအဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်ဖဲချပ်ချစ်သူများအားကစားလောင်းကစားဂိမ်းမည်သည့်အချိန်တွင်၏သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူအခြားကစားသမားထံမှအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ထားတက်သင့်ရဲ့စက်ဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးဂိမ်းအဖြစ်စားပွဲပေါ်အမြန်ဆုံး။ သင်လိုအပ်သမျှအနေနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်။ သင်ဖဲချပ်ကစားမီက–ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူး။ အက္ပ္ရှိစားပွဲတစ်ခုပေါင်းစပ်၏အကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်ရဖို့ရန်အသုံးပြုသည်။ လည်း၊သင်ဧကန်အမှန်ပျော်မွေ့နေ့စဉ်အခမဲ့အကြွေစေ့၊အရာဝယ်ဖို့သုံးနိုင်တယ်ချစ်ပ်များအတွက်အလောင်းသို့မဟုတ်လက်ဆောင်အခြားကစားသမားများအတွက်။ တောင်မှပိုပြီးဒင်္ဂါးပြားအနိုင်ရရှိခဲ့နိုင်အတွက်ထီ။ ထို့အပြင်မှာကဒ်စားပွဲ၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အတူအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတွေ။ ဂိမ်းအမေးအဘို့အခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲရန်ဆက်သွယ်ရေးအတွင်းဂိမ်း၊ဂိမ်းသည်မပြတ်တောက်အားဖြင့်"ဖုန္းခေတ္တ"။ သင်သည်လည်းတပ်ဆင်အဖြတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်။
ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ '။ ရှိပါတယ်၊သို့သော်၊တဦးတည်းသိသိသာသာ။ မစု၏ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်။ ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့အဘယ်သူမျှမအမိန့်မိမိတို့လက်ကိုအားဖြင့်ခွန်အားအဖြစ်သူတို့အတွက်ပုံမှန်ကျင်းပ '။ ကျွန်တော်မယူကဲ့သို့သောအဖွဲ့အ၊ဒါကြောင့်မူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားသတ်မှတ်ရမည်၏ပုံစံအတွက်များအစုတခုစတင်လက်များအဆိုအတိုင်းစည်းကမ်းမှတဆင့်အစာ။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်ကြောင်းရုံကိုယူ၏အမိန့်အလက်များအတွက်ပုံမှန်ကျင်းပ နှင့်စွန့်ပစ်ကတ်များကိုအောက်သံသထိုအရပ်မှ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှ၊အစွမ်းသတ္တိ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါသည် ၆ ကိုင် လုံးအတွက်ပိုအလားအလာရင်ဖမ်းထား၊သင်ရိုက်နှက်လိမ့်မည်ဆို၏။ တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်၊မိုချိတ်ဆက်ရှုံးမိမိတို့အသက်တမ်း။ ဤရွေးချယ်မှုအတွက်ကော။ လိုအပ်လာရင်၊ကျွန်တော်တို့လည်းအဘို့ထိုသို့ပြု။ အရှိသမျှတို့သည်သင်္ချာရေးသားသည်။ ရက်အနည်းငယ်အလုပ်၏။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်။ မယ်ခွေမှာပါ။ ဒါကကြီးမြတ်ရဲ့။ နှင့်မောင်းနှင်မှုအတွက် ၏အ လည်း ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အကောင်အထည်ဖော်အတွက်? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာလည်း? လျှင်ဤအမှုအလုံးစုံအကောင်အထည်ဖော်မည်ဝယ်ချက်ချင်းအမှုအဘို့အဖြောင့်ထားခြင်း၊လိုအပ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ဖို့ ။ အများဆုံးမှန်ကန်သောလမ်းကိုအသုံးပြုရမည်ဖိုင်များနှင့်အတူလက်ကိုအမိန့်။ ဥပမာများထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တစ်ခုပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ စ်ဘလော့ဂ်၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူမည်သို့ဤဖိုင်များကိုဖန်တီးထားကြသည်။ ငါသည်အထားပြီးဒီဖိုင်အဘို့အ ၆ မက်စ်ဖြန့်ချိမိုဃ်းတိမ်၌။ ဒီယုိဖုိင္၊အားလုံး ၁၆၉၏ဆဲလ်အသိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်အားဖြင့်ခွန်အား။ အများဆုံးမှန်ကန်သောလမ်းဖြစ်အောင်ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်အဘို့အ ၆ ကိုင် အဘို့အကစားသမား။ ဒီမှာအဓိကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးထည့်မူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားအားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်း၊ဒါပေမယ့်သေချာ ကြတာကတော့။ ေသာမန်ကိုင် '၊ဤ တည်ဆောက်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဤ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်နီးကပ်သူတို့ဖြစ်ဖို့အဖြစ်မှန်? မကစား ၆ ၊ပြီးလျှင်ပင်၊ကျနော်တို့ပြု။၊ဤအ လိုဆဲပုဂ္ဂလ။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ဒါဟာမခက်ခဲသည်အတွက်ထုတ်ရေးသားရန် ၈၁ ဟာဗျူဟာအတွက်အတွက်အမိန့်အစွမ်းသတ္တိ၏။ အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဒီဖိုင်ကိုတိတိ။ အဆိုပါပြဿနာသည်ရှင်းလင်း။ ငါနားလည်တယ်၊လက်ခွန်အားသည်အတူတူပင်များအတွက်ဂန္ထဝင်၆အဘို့နှင့်အဖြောင့်အစုံ။ပင်လျှင်ဤသည်မှာလုံးဝမမှန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်။ ဒီနေဆဲပိုကောင်းသည်ထက်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းအတွက်ရောင်စဉ်တန်း။ ၂။ ထားခဲ့ပါထားအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအသံုးျပဳသူမ်ားအပြင်ဤစားပွဲပေါ်မှာ။ ငါနားလည်တယ်၊အကြမ်းအားဖြင့်စကားပြော၊နှင့် ၈၁ ရာထူးရှိပါတယ်၃။ များအတွက်အဆုံးအသံုးျပဳသူမ်ား၏၊ကျနော်တို့သူအပျင်း၊ထို့နောက်သူကအသုံးပြုသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်၊မောင်းနှင်မှုအတွက် ၁၀ သူရသူ၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍သူသည်ယုံကြည်သောလက်အစွမ်းသတ္တိကိုသတ်မှတ်မမှန်ကန်စွာ၊သူသည်အစဉ်ပြင်မှာမိမိဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲအဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကို၏။ ၄။ အနာဂတ်အတွက်ဆိုရင်၊ရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအလေးအနက်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤဖိုင်အစဉ်အစားထိုးပြီးရင်အရာရာအဆိုအဆိုးဆုံး။.
တွေ့အကြုံမရှိသေးဖဲကစားသမားအဖြစ်၊အတွက်အခြားမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သင်ယူဖို့သီအိုရီအမည်ရအခြေခံဖဲပေါင်းစပ်။ နီးပါးအားလုံးစည်းကမ်း၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျင်းပ '၊၊တွယ်၊ဆြဲဖဲချပ်ရှိသည်၊ဂန္ထဝင်ပေါင်းစပ်။ ဖဲပေါင်းစပ်များမှာမရှိမဖြစ်အောင်များအတွက်သွားလာရန်လွယ်ကူသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ကတ်များနှင့်နပ္၊အလှည့်၊နှင့်အမြစ်။ သင်ကမကြာခဏအနှံ့လာဝေါဟာရနှစ်ခု:"ပေါင်းစပ်"ပြီး"လက်"။ ပေါင်းစပ်–ထားကြောင်းကတ်များ၏တရားဝင်သည်နှင့်အညီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။လက်–အုပ်စုတစ်စု၏အကြောင်းကတ်များအသုံးပြုနိုင်သည့်အခါဂိမ်းကစား။ အလောင်း။ နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အစားမဆံ့မစေခြင်းငှါပေါင်းစပ်။ ၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါသည်စုဆောင်းဖို့တစ်ဦးအနိုင်ရတဲ့ပေါင်းစပ်ထား၏။ ဝ ၅၂-ကဒ်ကၤန္အတွက်အသုံးပြုသည်။ အလေးကိုက်ဂေါ်ပြား၏၊ကလပ်အသင်း၊နှင့်နှလုံးအမြဲတန်းတူညီမျှ။ သူတို့ဘယ်လိုပုံစံအနိုင်ရတဲ့ပေါင်းစပ်? အတွဲသည်အရိုးရှင်းဆုံးပေါင်းစပ်သာ။ ဒါဟာပါဝင်ပါသည်တစ်စုံနှင့်မည်သည့်အသုံးအခြားကတ်များ။ အများက်၏အရံဆုံးဖြတ်သည်။ လျှင်ကစားသမားတွေအများအကောက်အတူတူအားလုံး၊ထို့နောက်အသက်သက်ဆိုင်ကဒ်။ နှစ်ဦးလုံး–နှစ်လုံးအတွက်ကတ်များ၏တူညီသောအဆင့်ပေါင်းအပိုဆောင်းကဒ်ေမး၏၊နှစ် ၁၀ ရဲ့ ၇ ရဲ့။ လျှင်အများအပြားကစားသမားတွေအများအကောက်ကိုနှစ်ဦးလုံးအတွက်၊အဆိုပါဆုအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်အမြင့်ဆုံး။ အကယ္ကစားသမားပွဲစဉ်အမြင့်ဆုံးတွဲ၊၏တန်ဖိုးကိုနောက်အရံအဆုံးအဖြတ်ခံရလိမ့်မည်။ အတွက်ဖဲချပ်များပေါင်းစပ်၊နှစ်ဦးတူညီ၏၊ကစားသမားများ၏တန်ဖိုးကိုအခြေခံကဒ်မကြာခဏဟုခေါ်ဩစအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွား။ မိုင်းနားသတ်မှတ်–သုံးကတ်များ၏တူညီသောရာထူးနှင့်နှစ်သက်ဆိုင်သူများ။ အဆိုပါဆုရှင်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်များက်၏ထိပ်ကိုသုံး။ ဖြောင့်ဖဲချပ်ပေါင်းငါး ဆက်တိုက်ကတ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကိုက်။လျှင်အများအပြားကစားသမားစုဆောင်းဖြောင့်တစ်ကြောင်း၊အဆိုပါဆုအားအမြင့်မားဆုံးကဒ်။ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်တစ်ဖြောင့်တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အမြင့်ဆုံးအောက်မင်းကြီးနှင့်အနိမ့်ဆုံးကဒ်မီ ၂။ ရှင်းလင်း–ငါးကတ်များ၏တူညီဝတ်စုံအောက်ပါအမိန့်အရေးမပါဘူး။ လျှင်အများအပြားကစားသမားတွေတစ်ချိန်တည်းမှာစားပွဲပေါ်ရှိအရပ်ကို၊အဆိုပါဆုအားအမြင့်မားဆုံးကဒ်။ လျှင်မြင့်သောကတ်များကိုတန်းတူညီမျှရှိပါတယ်၊ထိုအခါတန်ဖိုး၏၂၊၃၊၄၊၅ ကတ်များကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အပြည့်အဝအိမ်များအားလုံးသုံးကတ်များကိုတူညီတဲ့ရာထူးအစုံ။ အဆင့်သုံးကတ်များကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ခွန်အားကိုအပြည့်အဝ။ သုံးမးရဲ့တရံနှင့်အတူ ၇ င်ကျော်အနိုင်ရရှိနှင့်သုံးည၏အစုံ ၁၀။ တစ်စတုရန်းတဲ့ဖဲချပ်ပေါင်းလေးကတ်များတူညီတဲ့ရာထူး။ ရှိပါတယ်လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုရင်ပြင်မှာစားပွဲ၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကတ်များအနိုင်ရလေး ရိုက်နှက်လေး ၁၀။ ဖြောင့်ရှင်းလင်း အင်္ဂလိပ်ငါးကတ်များ၏တူညီဝတ်စုံ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဖြောင့်ရပ်ကနေ ၈ အ ။ လျှင်အများအပြားရှိပါတယ်ဖြောင့်ကိုယ္ႏစားပွဲ၌၊အတူအမြင့်မားဆုံးကဒ်အနိုင်ရ ပေါင်းစပ်ကဒ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဖြောင့်ဆေးကြောဖို့ကေစည်းချက်ဖြောင့်ဆေးကြောဖို့မး။ တော်ဝင်ဆေးကြောသည်အကောင်းဆုံးကဒ်ပေါင်းစပ်အတွက်ဖဲချပ်၊ထို့ကြောင့်လျူ။ ဒါဟာပါဝင်ပါသည်ငါးကိုက်ကဒ်၁၀ ဝ။ အားလုံးကိုက်ညီ။ ထို့ကြောင့်၊အများအပြားကစားသမားစုဆောင်းနိုင်တစ်ဦးတော်ဝင်ဆေးကြောတချိန်တည်းမှာပင်။ပါကကစားသမားမကောက်ယူမည်သည့်အထက္ဖဲချပ်ကဒ်ပေါင်းစပ်၊စုစုပေါင်းသည်သူ၏ရာထူးအမြင့်မားဆုံးကဒ်အချက်အလက်။. လျှင်ကစားသမားတွေအများတူညီသောအမြင့်ကဒ်၊ထိုအခါတန်ဖိုး၏၂-၅ ကတ်များအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွား။ တခါတရံဖဲကစားသမားတွေအများအတိအကျတူညီပေါင်းစပ်မှုနှင့်အချိန်တည်းမှာအမြင့်ဆုံးအသို့မဟုတ်အားလုံးအပိုဆောင်းကတ်များအတွက်တန်းတူညီမျှရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊ထိုအိုးသည်ဖြန့်ဝေမျှတို့တွင်ပိုင်ရှင်များ၏တန်းတူညီမျှ။.
ဒါဟာအလွန်အရေးပါသည်တိုင်းကကစားသမား၏အခြေခံသင်ယူဖို့။ အောင်မြင်သူ၏တစ်ခုလုံးကိုဖဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်မူတည်တယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊အဆိုပါဆောင်းပါးအောက်တွင်ကြိုးစားနားလည်သဘောပေါက်ရန်အသေးစိတ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖဲချပ်အတွက်ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ပြသဖဲပေါင်းစပ်အားဖြင့်များက်။ ဤသည်မည်သည့်အလက်ကိုအသုံးပြုမရနိုငျမဆိုအတွက်အောက်ပါပေါင်းစပ်အနည်းဆုံးအလက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဥပမာ၊အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်သမျှအလက်ကိုနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးကဒ်အဘယ္ဘက္မွ။ တစ်စုံ တရံဆိုနှစ်ခုကတ်များတူညီတဲ့ရာထူး။ ဥပမာပြတယောက်အာဏာအရှိဆုံးလုံး၏ရှင်ဘုရင်အင္ဂ်င္ပါ။ နှစ်ခုတွဲအနည်းဆုံးနှစ်ခုကတ်များအတူတူရာထူးတူအနည်းဆုံးနှစ်ခုကတ်များ၏တူညီသောတန်ဖိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာကနှစ်လုံးအအေ့စ်နှင့်ဇဝငျ။ ဤသို့ပေါင်းစပ်ကျရောက်ထွက်များအတွက်ကစားသမားနှစ်ယောက်က၊အဆိုပါတန်ဖိုး၏ပေါင်းစပ်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်၏စုံတွဲတစ်တွဲအမြင့်ဆုံး။ သုံး၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာသည်-မည်သည့်အသုံးကတ်များတူညီတဲ့ရာထူး။ ဥပမာကိုပြသထားအေ့စ်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးဩ၊အဆိုပါဘုရင်နှင့်မိဖုရားအပေါ်ဘေးထွက်ဆိုး။ ဤအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်စုအားလုံးတတ်နိုင်သမျှဖြောင့် ဖြောင့်မဆိုငါးကတ်များအမိန့်အတွက်။ အအေ့စ်တွင်အဖြောင့်ဖြစ်ရေတွက်နိုင်တစ်ခုခုကိုအမြင့်ဆုံးသို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံး။ ဥပမာပြအနိမ့်ဆုံးဆင်းရဲမှဖြောင့်တယ်။ အမြင့်ဆုံးဖြောင့်ဆယ်-ဂျက်-မိဖုရား-ဘု-အေ့စ်။ ရှင်းလင်းဆိုငါးကိုက်အတွက်ကတ်များကိုမဆို။ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတစ်ခုဆွဲအားအမြင့်မားဆုံးကဒ်။ ဥပမာကိုပြသရှင်းလင်းနှင့်အတူဘယ္ဘက္မွ။ အပြည့်အဝမဆိုသုံးကတ်များ၏တူညီသောအဆင့်နှင့်အရံ အခြားနှစ်ဦးနှင့်မြေပုံ။ ဥပမာကိုပြသသည့်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအိမ်အပြည့်ပဲ။ အကယ္ကဒ်ပေါင်းစပ်လုံးဝအညီ၊အဆိုပါအောင်ပွဲအခြားကစားသမားနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးသုံးကတ်များမှအပြည့်အဝ။ ထိုအခါအဆိုပါစုံတွဲသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အားဖြင့်ရာထူးနှင့်အမှုအတွက်ပြည့်စုံခြင်းတန်းတူရေး၊အိုးအကြားခွဲ။ လေးတစ်ဦး၏အကြင်နာသည်-မည်သည့်အလေးကတ်များတူညီတဲ့ရာထူး။ လျှင်နှစ်ယောက်အတူတူ၏၊အိုးခေါ်ဆောင်သွားသည်အားကစားသမားအဘယ်သူသည်အဆိုပါပဉ္စကဒ်အခြားစကားများတွင်၊ဩစရာပါ။ ဘာအခြားပေါင်းစပ်ရှိပါတယ်အတွက်ဖဲချပ်? ကျွန်တော်တို့ရှာနေကြမှာနှစ်ပြီး၊အများဆုံးရှားပါး။ ဖြောင့်ဆွဲအဖြောင့်အရပ်မှစတင်အနိမ့်ဆုံးကဒ်အတွက်တက်နိုင်ရန်၊ပါဝင်သည်အားလုံးကဒ်များနှင့်အတူကိုက်ညီ။ လျှင်နှစ်ယောက်ကစားသမားတွေတစ်ဖြောင့်ဆေးကြောခြင်း၊အိုးဝင်အားကစားသမားနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မား။ ဒါပေမဲ့အဲဒီဖဲချပ်ဂိမ်းသင်လိုအပ်ဘယ်မှာအစုဆောင်းဖို့အနိမ့်ဆုံးပေါင်းစပ်။ ဦးကို။။။ အဘယ္ဘက္မွနိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုစတင်သည့်အမိန့်သို့မဟုတ်ဆုံး။ တော်ဝင်ဆေးကြော-ဖြောင့်မှဆယ်ဖို့ဘယ္ဘက္မွကနေကတ်များ၏တူညီဝတ်စုံ။ အရာအားလုံးအတွက်ဖဲချပ် ကဒ်အကိုက်အတူတူ၊အိုးအားလုံးရှိရမည်ဖြန့်ဝေမျှအကြားတူညီသောအလက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တန်ဖိုး။ သို့သော်၊အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုတော်ဝင်ဆေးကြောတဦးတည်းလက်၌အတွက်ကလွဲပြီးရွေးချယ်စရာအများအသိုင်းအကတ်များအပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ!ဤသည်အမြင့်ဆုံးအလက်ကဲ့သို့သောဂိမ်းများအတွက်ကိုင် နဲ့ ။ ကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်ထားပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့၊ဒီပေါင်းစပ်အလုပ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်ကိုင် '၊၊တွယ်၊ဂန္။ ဒီအဖြစ်နိုင်အားလုံးကဖဲပေါင်းစပ်အားဖြင့်များက်! ငါသည်လည်းအကြံပြုစာဖတ်ခြင်းဖြားဖဲရွေ့နှင့်အကောင်းဆုံးဖဲရုပ်ရှင်တွေ၊ကံကောင်းပါစေ။ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိငါသည်အဘယ်သို့လိုအပ်! ဘယ်လောက်ဤပေါင်းစပ်၍ယခင်ကငါ့ထံသို့ရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့သည်နေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ယခုငါအရာအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကၽြႏ္ုပ္၏အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ။ သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အလင့်ခ်ကိုဖန်တီးအသစ်တစ်ခုကိုစကားဝှက်ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်။
အများဆုံးအတွေ့အကြုံမရှိသေးဖဲကစားသမားမသိကြောင်းသူတို့အဘို့မှန်ကန်ပိုက်ဆံဖဲချပ်တစ်ပြားဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်ရဖို့တစ်ဦးမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအတွက်ဖဲချပ်အခန်းအသင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ။ ထိုကွောငျ့၊သင်သည်အလျင်စလိုမပြုမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ဖဲချပ်ခန်း၊မဟုတ်ရင်သင်အပေါ်ထွက်လက်လွတ်သင့်ရဲ့အခွင့်ရဖို့တစ်ဦးမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအတွက်ကစားသောဖဲချပ်။ ရအခမဲ့ဖဲချပ်အပ်၊သင်လိုအပ်အရေအခြေအနေ၏အခန်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အခန်းကမ်းလှမ်းသောအဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲယင်း၏အသုံးပြုသူများမှ။ ပိုပြီးမကြာသေးမီက၊တွဲဖက်ဆိုက်များ သူတို့ပေးမိမိတို့အအသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့ဖဲချပ်သိုက်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊အကျော်ကြားဆုံးသောအခါပူဇော်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲချပ်ဖို့ရုရှားစကားပြောကစားသမားအ ၊အရာအတွက်အချိန်အကြာခဲ့တဲ့"ဖဲအပိုဆု ၅၀"ကိုအဘယ်သူသည်နယူးကစားသမားတွေအပေါ်မှတ်ပုံတင်ပေါ်တယ်၊အောင်မြင်စွာအောင်မြင်သောစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြဖုန်းဖြင့်။ ယခုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ရတဲ့တစ်ဦးမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအတွက်ဖဲချပ်သည်ရိုးရှင်းသောတတ်နိုင်သမျှ၊နှင့်သုံးစွဲသူများကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်မှတ်ပုံတင်ပြီးဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်အဝင်အထူးနှုန်းများကုဒ်အခါမှတ်ပုံတင်အတွက်ဖဲချပ်။ ကတည်းကအများကြီးရှိပါတယ်များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအဖဲအခန်းပေါင်းရှိပါတယ်၊တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်သစ်ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲခန်းများ၏အရေများကျော်အားသာချက်များခန္းမပူဇော်သောအဘယ်သူမျှမသိုက်ဦးဆောင်သောဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအသစ်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဖဲဆုကြေးငွေအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွန်း။ ခပ်သိမ်းသောသစ်ကိုအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအတွက်ဖဲချပ်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်အတွက်စိတ်ဝင်စား။ ထို့ကြောင့်၊ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကြံပေးရန်အဘို့အမျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်သစ်အဘယ်သူမျှမသိုက်သိုက် ကမ်းလှမ်းအားကစားသမားအားလုံးသက်သက်မဟုတ်၊အရင်ကဆိုရင်အဖြစ်၊ဤသည်အခွင့်အထွက်ကြိုးစားဖို့အသစ်တစ်ခုကိုလယ်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းအသစ်နေရာအရွာင္ဖယ္ေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေသာမိုက်ခရိုကန့်သတ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးေရာင္းရန္-န့်အသတ်ရှိပြီးအဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသိုက်။ အခမဲ့ပွဲတော် ၇၇၀:နာရီ အခမဲ့ နှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန် ၀။၀၅တရားဝင်အထိသဂုတ္လ ၃၁၊၂၀၁၄။ အခမဲ့အစီအစဉ် ၇၇၀သုံးနိုင်တယ်နေစဉ်ကစား ၇၇၀ အြန္လိုင္း:လက်ခွန်အားအညွှန်းကိန်းများနှင့်ဂိမ်းအချက်အလက်အချက်အလက်၊တွက်ချက်မှု၏တနေရာနှင့်အလေးအတွက်အွန်လိုင်း။ ဝင်ရောက်ရန်အကောင့်ဖန်တီးလော့ဂ်:"ကိုင္"အထက်ညာဘက်ထောင့်၊မီနူးဖွင့်လှစ်ပြီးရွေးပါ"ငါ၏အအကောင့်ကို"၊လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီးကိုနှိပ်ပါတင်ပြလက်ခံရရှိပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေသာမိုက်ခရိုကန့်သတ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးေရာင္းရန္-န့်အသတ်ရှိပြီးအဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာပြီးနောက်$၅ ထွန်ကစားသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသိုက်။ ဝီလျံဟေးလ်ဖဲနည်းပြအက္ပ္ကိုေ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ဂိမ်းများမှာ:လက်ခွန်အားအညွှန်းကိန်းများနှင့်ဂိမ်းအချက်အလက်အချက်အလက်၊တွက်ချက်မှု၏တနေရာနှင့်လေး၊နှင့် စာရင်းဇယားအပေါ်အတိုက်အခံအွန်လိုင်းလက်မှတ်များအတွက်လစဉ် သစ်အပ္ႏလက်ဆောင် သောကစားသမားယူသူပထမ ၂ ရပ်တို့ကိုလက်ခံရရှိတသို့မဟုတ်လေးစတေရှင် ၄ င့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊နှင့် ၃–၈ ရပ်-တစ်ပစ္စည်းကနေရွေးချယ်ဖို့ ၁၀၀၀ ၊ အသုံးပြုနိုင်သည့်အဖြစ်ဝယ်မှာကလပ် တာလျှံပြိုင်ပွဲနှင့်အတူလစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ ၂၅၀၀ သို့မဟုတ်ဖလှယ်ဘို့အိမ်ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေသာမိုက်ခရိုကန့်သတ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးေရာင္းရန္-န့်အသတ်ရှိပြီးအဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသိုက်။ သင့္ထင္ျ အကောင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ပါတယ္ဖဲအသုံးပြုသူအမည်အပေါ် မှတ်ပုံတင်ဖို့သည့်အခါ၊အသစ်ကစားသမားကိုလက်ခံရရှိအခမဲ့လက်မှတ်များအ နှင့် ပြိုင်ပွဲ၊အဖြစ်အားကစားမှာအလုအယက်နှင့်အလင်းအလျင်ငွေစားပွဲ:ရရှိနိုင်သောအတွက်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ဘိုလီးဗီးယား၊ ကော့စတာရီ၊အင်ဒိုနီးရှား၊မော်လ်ဒိုဗာ၊ေမာ္ရုိကို၊ပီရူး၊ရုရှား၊ထိုင်း၊မင္နီ၊ဥဇဘက်၊ဗီယက်နမ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ရာ အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အ အကောင့်အမည်ကိုသင်ဝင်အကောင့်အမည်ကိုအတွက်အဆင့် ၅အ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ပါ၊အီးမေးလ်လိပ်စာဘယ်မှာအ အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အ အသုံးပြုသူအမည်အသင်ဝင်အသုံးပြုသူအတွက်အဆင့် ၄အပေါ်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ငွေရရှိနိုင်သောအယ်လ်ဘေးနီးယား၊အာဂ်င္တီးနား၊သြစတြီးယား၊ဘီလာရုစ်၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊မျူ၊ရှား၊ဖင္လန္၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂျာမနီ၊ဗဲ၊ဟန်ဂေရီ၊အိုက်၊ဂျာကျွန်း၊လစ်တင်ရှတိုင်း၊လစ်သူယေး၊လူဇင္ဘတ္၊ဖၚျ၊မော်လ်တာ၊နယ်သာလန်၊နော်ဝေ၊ပေါ်တူဂီ၊ရိုမေးနီးယား၊ရုရှားနိုင်ငံ၊စိန့်ကစ်နှင့်နီးဗစ်၊ဆလိုဗက်ကီး၊ဆလိုဗေးနီး၊ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီး၊အသုံးပြုသူအမည်အပေါ် အသုံးပြုသူအမည်သင်သို့ဝင်တွင်အဆင့် ၄နှင့်အမည်ပြောင်အပေါ် အမည်ပြောင်သင်ဝင်အဆင့် ၅အပေါ်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ငွေအမရနိုင်ငံများအတွက် ဘိုလီးဗီးယား၊ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ကိုလံဘီယာ၊ကော်စတာရီကာ၊ပြင်သစ်၊ဟန်ဂေရီ၊အင်ဒိုနီးရှား၊အစ္စရေး၊အီတလီ၊လစ်သူယေး၊မော်လ်၊မော်ရို၊ဖိလစ်ပိုင်၊ပိုလန်၊ရိုမေးနီးယား၊စင်ကာပူ၊တူရကီ၊ဥဇဘက်၊အမေရိကန်၊ဗီယက်နမ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်သင့်လွန္အက်ိဳးဖဲအသုံးပြုသူအမည်ကိုဆိုက်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ငွေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးကြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများမှာတက်ကြွကစားသမားတွေနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံသောသူကိုရှင်းပြအတွက်ဖတ်ရှုခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်အောင်မြင်စွာကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအတွက်ပေါင်းသည်။
များစွာသောအတွေ့အကြုံမရှိသေးဖဲချပ်တို့သည်ညှဉ်းဆဲခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါမေးခွန်းတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့ဖဲချပ်။ မှအဖြေကိုရှာတွေ့ရန်ခက်ခဲမေးခွန်း၊အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်လိုအပ်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စံသတ်မှတ်ချက်သည်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေဆုံးအလုပ်သင်အသိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာ။ ပြီးနောက်၊သငျသညျစစျဆေးဖို့လိုအပ်သောဖဲချပ်အခန်းပေါင်းသင်တို့အဘို့အသင့်လျော်အဆိုအရဤစံ။ သင်ကကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်၏လက်ကိုမှာဖြစ်နိုင်သမျှနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ခြင်းငှါမသကဲ့သို့အန္တရာယ်ကြီးမားသောပမာဏ၊အာရုံစိုက်ရန်။ အားလုံးမဟုတ်ဖဲခန္းမ်ားထောက်ခံမှုမှာကစားခြင်းစူပါအနိမ့်ကန့်သတ်။ အမှားတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါအခန်းအပေါ်အခြေခံပြီးဤတမ်းပလိတ်သင်ကုန်ကျနိုင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်ကို၏မျက်နှာပြင်အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုင်း၊၎င်း၏အဆင်ပြေဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊စုံ- အထောက်အပံ့၊နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအရေးအတွက်အမြဲကစားသည်။ ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြချက်၏အခန်းပေါင်း။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊သင်မေးနိုင်သငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများ။ လက်ငင်းပထမဦးဆုံးသိုက်ဆုကြေးငွေ$၂၀ နောက်ထပ်ပထမဦးဆုံးသိုက်ဆုကြေးငွေများ ၂၀၀ အထိ ၁၅၀၀
လောင်းကစားသမားများဖွင့်လှစ်နိုင်နစ္ခုကနေသူတို့ရဲ့ရာက္ဇာကိုသုံးမီးေနည်းပညာ၊သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ် အွန်လိုင်းကာစီနိုကနေတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာကစားရန်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်။ အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ပေးထောင်အများအပြားကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်း၊ ကစားတဲ့၊စားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းများ၊ဖဲ၊တိုက်ရိုက်လောင်းကစားရုံ။ လောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးသည်ပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်အတွက်နိုင်ငံအများအပြား။ လောင်းကစားဆိုက်များမကြာခဏပိတ်ဆို့ ။ နိုထွင်ခဲ့သည်:သင့်အနေဖြင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမှအရာရှိ ။ အဆိုပါဗားရှင်းအပေါ်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်မှ ။ များအတွက်၊ရှာတွေ့အက္ပ္ကိုအတွက်။ ဒေါင်းလုဒ်ချဆော့ဖ်ဝဲအယူအဘယ်သူမျှပိုထက်ငါးမိနစ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်အဒီဇိုင်းအတွက်တစ်ရိုးရှင်းသောစတိုင်ကိုအသုံးပြုစေခြင်းဇိုင်းညွှန်းနှင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ။ ကစားသမားစာရင္းကိုအသုံးပြုတပ်ဆင်ထားဆော့ဗ်ဝဲသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းအောက်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဝင်သဖြင့်လက်ရှိအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကို။ ကလပ်အာမခံ၏လုံခြုံရေးလိုင်းရဲ့အချက်အလက်။ အွန်လိုင်းဗားရှင်းနှင့်အအက္ပ္ကိုသုံးအားကြီးသောဒေတာများစာဝှက်ချန်နယ်။မိုဘိုင်းဗားရှင်း
နိုခွင့်ပြုဖို့အတွက်လျှောက်ထားထုတ်ယူသို့မဟုတ်အောင်သိုက်အားဖြင့်တဦးတည်းကိုရှေးခယျြများအတွက်ရရှိနိုင်။ အမြန်နှုန်းများ၏ငွေပေးချေမှုအပေါ်မူတည်ရွေးချယ်နည်းလမ်း:အခါတစ်ခုတင်သွင်းခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာ ရုပ်သိမ်းရေးန့်သတ်ကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည်။ အပေါ်မှာမူတည်ပြီးလောင်းကစားရဲ့အဆင့်အတန်း၊အကန့်သတ်ရန်အတွက်နေ့စဉ်ထုတ်တိုးပွါး။ ဒါဟာအထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ၅၀၀၊၀၀၀ ရူတစ်နေ့လျှင်။ ကစားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအငြိ၊ဒါကြောင့်လက်ကိုအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှာသည်မှန်လျှင်သင်မည်သည့်အခက်အခဲသစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်တရားဝင်ဆိုက်။ ကိုယ့်အအက္ပ္ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုနှင့်ဂိမ်းပျော်မွေ့။ တွင်လောင်းကစား'ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အပြုသဘောမှတ်ချက်အကြောင်းအဆိုပါလုပ်ငန်း၏မိုဘိုင်းစီအစဉ်။ ကစားသမားလေးမြတ်တန်ဖိုး၏အမြန်နှုန်းမှာကုန်တင်အေ၏အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်၊အဆင့်မြင့်သည့်အခါထက်မှကစားတဲ့။.
ရရန်မည်သို့$၁၁ အပေါ် အခမဲ့
မကြာသေးမီက၊ကျွန်တော်အများကြီးလက်ခံရရှိအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်မှကျေနပ် သူအသုံးပြုသူများအမတစ်ဆုကြေးငွေပေး။ ကျနော်တို့အမေးအဖဲခန်းကိုယ်စားလှယ်များအဘို့နှင့်မှတ်ချက်များရေးသားပြုစုဒီပစ္စည်းကိုကူညီဖို့ကစားသမားအပိုဆုရ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အခန်းရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမျှဝေမထားဘူးသော်လည်းမအကြောင်းပြချက်များအတွက်ငြင်းဆန်များအတွက်ဆုကြေးငွေအသီးအသီးတိကျတဲ့အကောင့်ကို။ သို့သျောလညျး၊ကျနော်တို့ကောက်ယူပါပြီအဓိကအကြောင်းအငြင်းအတည်ပြုရန်သင့်အကောင့်:ဒါကြောင့်မှတ်သားထိုက်သောဤအရာအလုံးစုံမှုအနည်းဥပဒေများ၏အခန်းသောနောက်တော်သို့လိုက်ကိုသာအားဖြင့်ငြင်းဆန်အတည်ပြုရန်သင်၏အကောင့်များ၊ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏နှင့်အတူပိတ်သိမ်း ၏ရန်ပုံငွေ။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးပါသည် သတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးသောအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေသာကစားသမားတွေများအတွက်ရရှိနိုင်ကနေ ၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူၼရုစ္။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမျှော်လင့်ပါတယ်ပညာအရကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး$၁၁ ဆုကြေးငွေကနေအခမဲ့အဘို့ ။ အသာဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ငြင်းဆန်ဆုကြေးငွေအဖြစ်၊သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရန်ပျက်ကွက်သွားလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ။ ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောက်ဆုံးအပြီးမဖို့အယူခံ။ ဤကိစ်စတှငျ၊တစ်ဦးဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိ၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်ဂရုတစိုက်ဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအသေးစိတ်များကိုလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ ဖတ်ရှုပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာ၏အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှု။ မှတ်ပုံတင်အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေ။ ယူထွက်ငွေနှင့်အပေါ့ချက်တယ္တဲ့။ ဘူးသူတို့ကတကယ်လုံလောက်ကော်မရှင်? ငါပြုနှင့်အတူအခန်း။ စင်ကြယ်သောအဘော်အခန်းရှိပါတယ်၊တဦးတည်းအလုပ်တခုကို! ငြထုတ္လိုကစားသမား။ အယာဥ္တင္သြင္းပြည့်စုံ၊အခြားပြီးတစ်။ သင်ပြီးသားပြောနပ္အဘယ်အရာကိုလာမယ့်ကဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထွက်ပြေးလေ၏။ သူတို့အဘို့အပေးဆောင်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်ငွေ နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သူ့ကိုသူတို့အတွက်ကစားမြစ်ရေသည်မိမိတို့နှင့်အချို့သောရွေ့လျားဒါပေမဲ့သူတို့ပေးသောအရာတစ်ခုခု အပေါ်ဂိမ်း၊သင်ဆုံးရှုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ အဂတိအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအဘို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်ငြင်းဘဲရွင္းလင္းခ်က္:အဆိုအရ၏ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအကောင့်အားဖြင့်ကွန်ယက်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု၊အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေများအတွက်မှတ်ပုံတင်မရရှိနိုင်။ ဒါကတပြင်လုံးကိုအဖြေ။ လှည့်ဖြားမှအလွန်အစအဦး။ ငါလုပ်မည်မဟုတ်ပိုက်ဆံကစားအပေါ်ဒီအမှိုက်ပစ်တာ၊ငါအကြံပေးကြဘူး။
အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုး $၁၁ ပိုဆု
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ် နှင့်နောက်ဆက်တွဲအကောင့်ကိုအတည်ပြုကြသည်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးခြေလှမ်းများအကြောင်းသင်လိုအပ်အသွားအားဖြင့်ဖဲချပ်ကစားရန်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ။ သင်အသုံးပြုအကောင့်ဖန်တီးရန်အတွက်အထဲကိုဖြန့်ချိနှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ ပြီးနောက်ည့္စနစ္၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ငွေကိုထုတ်ယူဖို့ရန်ပုံငွေများ။ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဖြည့်စွက်ရန်မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဖဲချပ်ခန်း:အပေါ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တဆင့်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့။ အခါပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းအတွက်၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူတက်လာမည်ပြောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြ၏နာမအဖြစ်စားပွဲ၌၊တစ်စက်ဝိုင်း။ အတည်ပြုသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတည်ပြု၏။ လိုအပ်မှသွားဖွင့်အစား မှာအကွက်ရုံး။ သတင်းများအသုံးပြုသူများနိုင်ကား။ တည်ပြုရန်လိုအပ်သေချာစေရန်အခြေခံမူများ၏တရားမျှတကစားနှင့်ရှောင်လိမ်လည်မှုအပေါ်အစိတ်အပိုင်း။ ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်၊ကျနော်တို့သေချာအောင်သင် ၁၈ အသက်အနှစ်၊အကောင့်ဖန်တီးပိုင်၊နှင့်ကြောင်းကိုသင်၏တဦးတည်းသာ။ အတည်ပြုရန်သင်၏အကောင့်ကို၊သင်ပို့ရန်လိုအပ်သည်ကော်ဖတ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ:ဘဏ်ကဒ်၊သင်အလိုတော်ရှိလျှင်အသုံးပြုရန်အတွက်ငွေပေးချေမှုသင်အနီးကပ်အလယ် ၈ ဂဏန်းနှင့်လုံခြုံရေး ကုဒ်အပေါ်ပြန်။ ည့္စနစ္ကြာမှ ၁ ရန် ၅ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး။ ပြီးနောက်ပြီးစီး၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အတည်ပြုအီးမေးလ်။ ပါကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုမည်သည့်မေးခွန်းတွေကအတွင်းစစ်ဆေး၊သင်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်းလိုအပ်ဖြည့်စွက်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သိုလိုင်းသွားဖို့နည်းလမ်းများကို။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၊အဆိုပါဖွင့်လှစ်"ငါ့အချက်အလက်"၊နှင့်ဒေတာရိုက်ထည့်အားလုံးအတွက်အချည်းနှီးသောနယ်ပယ်။ ကိုရိုက်ထည့်မှသာစစ်မှန်သောအချက်အလက်၊မဟုတ်ရင်သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေခုံေ။ အခါအလုပ်ရှုပ်ပြီး၊"ကယ်တင်"။ သင်သည်လည်းပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်သောလုံခြုံရေးအတွက်ချိန်ညှိ:ကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့စကားဝှက်၊ငွေပေးချေမှုနှင့်စကားဝှက်ကိုေပးပါကအသစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအီးမေးလ်က၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအဖြေကိုရဖို့ဆိုမေးခွန်းတွေအကြောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊အတည်ပြုချက်များ၊နောက်ဆက်တွဲကစား။ ဒါပေမယ့်ခင်အကူအညီတောင်းအီးမေးလ်ဖြင့်၊အဘို့အကြည့်အဖြေကိုအောက်တွင်–ထိုအခါကျနော်တို့ပြန်ဖြေအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းတွေ။
တစ်ရွေးချယ်ရေး၏ဗီဒီယိုများအပေါ်ခေါင်းစဉ်:-။။။။။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အွန်လိုင်း၊မှတ်ချက်၊နှုန်းက၊နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေ။ မင်္ဂလာပါ! ငါ့နာမကို ။ ကျွန်မ ၂၈ နှစ်အရွယ်။ ပုံမှန် ချင်တယ်ဆိုရင်:-ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖဲချပ်ကစားရန်အတွက်ပေါင်းမင်္ဂလာပါ! ငါ့နာမကို ။ ကျွန်မ ၂၈ နှစ်အရွယ်။ ပုံမှန် ချင်တယ်ဆိုရင်:အဖဲချပ်ကစားရန်အတွက်ပေါင်းဖဲ၊ဖဲ၊၊ဘယ်လိုဖဲချပ်ကစားရန်၊၊ဖဲသင္တန္း၊ အတွက်ရုရှား၊ ရုရှား၊ဖဲ၊ဖဲ၊ ဖို့ဘယ်လို၊ ဖဲချပ်ကစား၊၊ဖဲသင္တန္း၊ အတွက်ရုရှား၊ ရုရွန္၊အဂၤ! ငါ့နာမကို ။ ကျွန်မ ၂၈ နှစ်အရွယ်။ ပုံမှန် ချင်တယ်ဆိုရင်:-ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖဲချပ်ကစားရန်အတွက်အပေါင်း'ဝယ်အသစ်တစ်ခုတိုက်ခန်းကိုအတူကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့မေးခွန်း၊ယူကိုအဘယ်သို့တစ်ဦးရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုး။ ယခုရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေးအရာအားလုံးနှင့်အဒါဟာဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးအတိအကျဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်။ ကျနော်တို့အလွန်အတော်လေးအနည်းငယ်ဆိုင်များနှင့်လူတိုင်းများအတွက်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဗီဒီယို၊ငါနားလည်သူ"ကောင်းသောနေ့ပါ။ ငါရွေးချယ်ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ငါမကြာသေးမီကနေပြန်သွားအားလပ်ရက်မှာအလိုချင်ဆာင္ရြက္လိုက္ပါငါ့အအမှတ်တရများ။ ငါစောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုသင်တန်း၏၊ငါအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာပိုဟာသက။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊မကောင်းတဲ့သည်မဟုတ်၊ ၃ ထဲကမှတ် ၅။ ကမ်းခြေရိုးသားဖို့အရမ်းမကောင်း"ငါချစ်အရာအားလုံးကိုဆက်စပ်။ အထူးသဖြင့်ရုံးထောက်ပံ့ရေး။ လှပပုံမှန်မဟုတ်သောခြံ၊ခဲတံငါ့နည်း။ တူစာရေးသူ၏ဗီဒီယို၊ငါသည်လည်းအရာအားလုံးကိုချစ်သောပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ကြိုက်မှတ်စုနှင့်အတူအဟိတ်အဘယ်မှာရှိသင်ထည့်ထားနိုင်ရေးစာတမ်းတူအယ္လ္ဘမ္"ငြိမ်ဝပ်စွာနေအတွက်ဒီဟိုတယ်မှာဇွန်လ။ အကောင်းတယောက် ဘတ်ဂျက်။ ဟုတ်ကဲ့၊အခန်း၊အသေးစားဖြစ်ကြသော်လည်းစင်ကြယ်၏၊ပြီးနောက်ယာမ်ား၊အရာသင်လိုအပ်။ မ ခရီး၊ဒီအက။ အစားအစာအတော်လေးကောင်း၊အတော်လေးကွဲပြားခြားနား၊အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအချို။ ပေမယ့်ဘယ်က '
စာရေးဆရာဆန်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုဂိမ်းအတွက်အသုံးမပြုနှင့်ပျော်စရာလမ်းအတွက်။ မသာအများအပြားမျိုးကွဲများ၏အိုအေစစ်ဖဲချပ်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ကာစီနို၊ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးအမျိုးကွဲများ၏ကလပ်ဖဲချပ်:တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '၊တွယ်ဖဲ၊ဖဲ၊၊အရာအစားအကြားကြီးမားတဲ့အရေအတွက်လူအများအတွက်ခေတ်မီအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊မကွာပြောင်းရွှေ့မှ"အာရပ်နွေဦး"နှင့်လှုပ်သောအားဖြင့်စစ်ပွဲတွင်ဆီးရီးယား၊လာခဲ့သည်အမျိုး၏ရိုင်းအနောက်ဘက်။ နေသော်လည်းအမယုံနိုင်လောက်အောင်အခြေအနေတင်းမာတိုင်းဒေသကြီးအတွက်၊ထိုသို့လက်ဆောင်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကံကောင်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်။ ဖဲချပ်၏မုကတဲ့တစ်ပုဒ်အားဖြင့်စာအုပ်ဟောင်း ညီအစ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်မှဝန်ထမ်းနှင့်ယခုလူသိများသောသတင်းစာဆရာနှင့်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာမိုက်ကယ်ယာက်ၤားေ။
ကြီးမားတဲ့ဖဲချပ်ခန်းအကြောင်းများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်တစ်အများအပြားကစားသမားတွေ။ လျှင်သူတို့ကိုမဆိုမည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ဖဲကစားသမားချက်ချင်းထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှထွက်ရှာတွေ့။ မှာနာက္တစ္မ်ိဳးဖဲ၊ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အလုပ်လုပ်နာရီဝန်းကျင်ဘဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ အများအပြားရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုရရှိနိုင်သောဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်အလုပ္သ:တယ်လီဖုန်း၊အီးမေးလ်နှင့်ပုံမှန်မေးလ်၊အွန်လိုင်းချက်တင်။ အဖဲချပ်ပံ့ပိုးအဖွဲ့မှအသံုးျပဳသူမ်ား၏တောင်းဆိုမှုများအဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှ။ လျှင်ဖဲကစားသမားခဲ့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ချက်ချင်းဖြေရှင်းတော့၊ သူတို့သုံးစွဲဖို့အကြံပြုထားအအွန်လိုင်းချက်တင်ထဲမှာရရှိနိုင်လိုင်းဖဲချပ်။ ဆက်သွယ်ခြင်းသည့်အခါအတိုင်ပင်ခံ၊အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုအမည်ပြောင်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဘယ်အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင် ဒီင်းတို့၏လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကတည်းကအထောက်အပံ့အဖွဲ့ရှိရုရှားစကားပြောအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊သင်အလွယ်တကူအတွက်ကူညီ။ လျှင်ထိုပြဿနာကိုမလိုအပ်ပါဘူးတစ်လက်ငင်းဖြေရှင်းချက်၊ပြီးတော့ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်အရေးအသားကိုအီးမေးလ်မှ။ အဘို့အလျှင်အချို့အကြောင်းပြချက်သင်ချင်ကြပါဘူးဖို့အသုံးပြုအီးမေးလ်က၊သင်လုပ်နိုင်အရေးအနေနဲ့သာမန်အီးမေးလ်နဲ့ပို့ဖို့အောက်ပါဒိနိတ်: ၄၅ ၁၇၈၄ ဖီယာ၊ဘူေဂးလ္း။ မှာနာက္တစ္မ်ိဳးဖဲ၊အထောက်အပံ့ပေးလာဆယ္သူတုံ့ပြန်အသေးစိတ်အတွက်အားလုံးမှအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများအတွက်အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ ကစားသမားတွေအဘို့အပိုနှစ်သက်သူအသက်ရှင်ဆက်သွယ်ရေး၊နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲသည္ဖုန်းထောက်ပံ့။ ေခၚဤသူနံပါတ်များ:၊ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်၊တစ်မူထူးခြားသောရယ် ။ အခြားစကားများတွင်၊လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ပို့ရန်တောင်းဆိုမှုများ။ သူတို့ဤသို့ပြုအားဖြင့်အပေါ်လာတဲ့ဝင်းဒိုးအတူစကားပြောသောဖဲချပ်ကစားသမားတွေအဖို့အသုံးပွုနိုငျအသွယ်နည်းပညာထောက်ပံ့။ အခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုအသုံးပြုသည်ဤအဂၤါကြော်ငြာရန်နယူးအပိုဆုကြေးငွေထိုအပရိုမိုးရှင်း။ ကျွမ်းကျင်သူများကမှန်မှန်ဆက်သွယ်ကစားသမားတွေနဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ရအောင်တစ်သိုက်ရနိုင်ဖို့အတွက်တချို့ဆုကြေးငွေ။ အများအပြားကမ်းလှမ်းသန့်နှင့်မတွေ့ခြင်း"အထူးနှုန်းများ"၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခန်း။
Deskargá Gobierno Of Per - HOLDER di Android. E
အစီအစဉ် ဆင္အျေရုရှားနိုင်ငံ အေးဂျင့် လိမ်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ ဖဲတင္သြင္း
© 2021 ဖဲချပ်အွန်လိုင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ